၂။ပြည်ထောင်စုပြဿနာ – ရဲဘော်ကြင်မောင် – သူပုန်ဂေဇက်
၂။ပြည်ထောင်စုပြဿနာ – ရဲဘော်ကြင်မောင်
(မျိုးဆက်ဟောင်းမရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ မျိုးဆက်သစ်ရှင်းရမယ့် ဒုတိယပြဿနာက ပြည်ထောင်စုပြဿနာပဲ။ ရှင်းရတာပိုတောင်ခက်ပါလိမ့်မယ်)
၁၉၈၈/၁၉၉၀ မတိုင်မီက ပြဿနာ နှင့် ထိုနှစ်များနောက်ပိုင်းပြဿနာ မတူပါ။
၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုကြီး မဖြစ်မီက ပြည်ထောင်စုစနစ် လိုလားသူဘက်နှင့် တပြည်ထောင်စနစ် လိုလားသူဘက်ဟူ၍ ပြက်ပြက်ထင်ထင် ရှိခဲ့ပါသည်။ ပဋိပက္ခများ လည်း တခြိမ်းခြိမ်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသည့် နောက်တွင်ကား အထက်ပါပဋိပက္ခဟောင်း များ မရှိတော့ပါ။ ပဋိပက္ခအသစ်များ ဖြစ်လာ ပါသည်။ အသစ်မှာ အရေခြုံပြည်ထောင်စုဘက် နှင့် ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်ဘက်၏ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပါသည်။ အရေခြုံပြည်ထောင်စုဘက်တွင် စစ်အုပ်စုကရပ်ခံပြီး စစ်မှန်သည့်ပြည်ထောင်စု ဘက်တွင် စစ်အုပ်စုဆန့်ကျင်ရေး အဓိက အင်အားစုများ အားလုံးက ရပ်ခံပါသည်။
အရေခြုံ ပြည်ထောင်စုလော – ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်လော ပြဿနာသည် ယနေ့အဖို့ ကွင်းဆက်အကျဆုံး ပြဿနာ ဖြစ်လာပါသည်။ ဤပြဿနာမပြေလည်သမျှ “ပြည်ထောင်စု ပြဿနာ” ပြေလည်မည် မဟုတ်ပါ။
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) က သီးခြားတိုင်းပြည် ထူထောင်ရေး အတွက် လှုပ်ရှားခဲ့သည်မှာ ၁၉၄၇ ကတည်းက ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၉ ကျမှ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ တိုက်ခဲ့သည်။ ယခုအထိ တိုက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
“ခွဲထွက်ရေး” ကို ရှမ်းပြည် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် ( SSIA), ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တို့က ၁၉၆၀ ခုနှစ် တဝိုက်ကလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီခေတ် မဟုတ်၍ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကို တန်းပြီး လုပ်ခဲ့ရသည်။ သူတို့ယခု “ငြိမ်းအဖွဲ့” များ ဖြစ်နေပြီ။
သီးခြားတိုင်းပြည် ကြွေးကြော်သံမှာ လွတ်လပ်ရေးမရမီကာလ ပြည်ထောင်စု မဖွဲ့မီက ကြွေးကြော်သံဖြစ်၍၊ ခွဲထွက်ရေး ကြွေးကြော်သံမှာ ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ပြီးကာလ ကြွေးကြော်သံ ဖြစ်သည်။ ကာလချင်းမတူ၍ ကြွေးကြော်သံမတူခြင်း ဖြစ်သည်။ အနှစ်သာရ မှာ အတူတူဖြစ်သည်။
“သီးခြားတိုင်းပြည်” နှင့် “ခွဲထွက် ရေး” ကို ကြွေးကြော်လျှင် မုချလူမျိုးရေးအလံ ထူရသည်။ ၁၉၄၉ တွင် KNU က ကရင် လူမျိုးရေးအလံ ထူသည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင်
SSIA က ရှမ်းလူမျိုးရေးအလံ၊ KIO က ကချင်လူမျိုးရေးအလံ ထူခဲ့ကြသည်။ ကရင့် တော်လှန်ရေး၊ ရှမ်းတော်လှန်ရေး၊ ကချင် တော်လှန်ရေး ဟုပြောကြသည်။
နေဝင်း အောင်ကြီး စစ်အုပ်စုက ဗမာလူမျိုးရေးအလံထူပြီး “ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး” ကြွေးကြော်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဖဆပလ က တဖက်၊ ဗကပ၊ ပြည်သူ့ရဲဘော်၊ တော်လှန်သည့်ဗမာ့တပ်မတော် တို့က တဖက် ဖြစ်နေသည့် လူတန်းစားရေးပြည်တွင်းစစ်တွင် လူမျိုးရေးပြည်တွင်းစစ်ပါ ရောစွက်လာခဲ့သည်။ ဤတွင် ဖဆပလဦးနုအစိုးရက “ရောင်စုံ သောင်းကျန်းသူ”ဟု ပြောသည်။ ကွန်မြူနစ် ပျက် ဦးသိန်းဖေမြင့်) က အားလုံးက အားလုံး ကို တိုက်နေသည့် ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပြည်တွင်းစစ် ဟု ယူဆသည်။
လူမျိုးကြီးလည်းဖြစ်၊ နိုင်ငံရေး အာဏာလည်း ရှိသူက တပန်းသာမည်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွင် လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ ၆၈” က ဗမာလူမျိုးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ရှမ်းက ၉72 ၊ ကရင်က ၇၇ ၊ ရခိုင် ၄၇ ၊ တရုတ် ၃2၊ မွန် ၂Z ၊ ကုလား ၂Z နှင့် အခြားလူမျိုးများ ၅7 ဟု ဆိုသည်။ (အမေရိကန်ထုတ် နှစ်ချုပ် Time Almanac 2000 မှ)
ပြည်တွင်းစစ် စဖြစ်စဉ်က ဖဆပလ အစိုးရ၏ တပ်အင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
စဉ် တပ်အမှတ် လူမျိုးအလိုက်ပါဝင်မှု
၁ အမှတ် (၁) ဘားမားရိုင်ဖယ် ဗမာ (စစ်ပုလိပ်တပ်)
၂ အမှတ် (၂) ။ ကရင်အများစုနှင့် အခြားလူမျိုးစုများ
၃ အမှတ် (၃) ။ ဗမာ (မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်မှ လာသည်)
၄ အမှတ် (၄) ။ ဗမာ (မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်မှ လာသည်)
၅ အမှတ် (၅) ။ ဗမာ (မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်မှ လာသည်)
၆ အမှတ် (၆) ။ ဗမာ (မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်မှ လာသည်)
၇ အမှတ် (၁) ဘားမားရိုင်ဖယ် ကရင် (အင်္ဂလိပ်တပ်မှလာသည်)
၈ အမှတ် (၂) ။ ကရင် (အင်္ဂလိပ်တပ်မှလာသည်)
၉ အမှတ် (၃) ။ ကရင် (အင်္ဂလိပ်တပ်မှလာသည်)
၁၀ အမှတ် (၁) ကချင်ရိုင်ဖယ် ကချင် (အင်္ဂလိပ်တပ်မှလာသည်)
၁၁ အမှတ် (၂) ။ ကချင် (အင်္ဂလိပ်တပ်မှလာသည်)
၁၂ အမှတ် (၁) ချင်းရိုင်ဖယ် ချင်း (အင်္ဂလိပ်တပ်မှလာသည်)
၁၃ အမှတ် (၂) ။ ချင်း (အင်္ဂလိပ်တပ်မှလာသည်)
၁၄ အမှတ် (၄) ဘားမားရယ်ဂျီနှင့် ဂေါ်ရခါး (ဦးတင်ထွဋ်ရလိုက်သည့် အင်္ဂလိပ်အမွေ)
၁၅ ချင်းတောင်တပ်ရင်း ချင်း (အင်္ဂလိပ်လက်ကျန်)
စစ်ဦးစီးချုပ် – စမစ်ဒွန်း
ဒု- စစ်ဦးစီးချုပ် – စောကြာဒိုး
လေတပ်ဦးစီးချုပ် – ရှီးရှိုး
ရေတပ်ဦးစီးချုပ် – ခင်မောင်ဘို
မြောက်ပိုင်းတိုင်း – နေဝင်း
တောင်ပိုင်းတိုင်း – အောင်သင်း
အမှတ်(၁) တပ်မဟာ – စောချစ်ခင်
ရေးချုပ် – ကျော်ဝင်း
ထောက်ချုပ် – စောဒေါန်နီ
အထက်ပါစာရင်းကိုကြည့်လျှင် အများစုကြီးက “သခင်ကြီးတပ်” (အင်္ဂလိပ်တပ်ကို နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးသမားများကခေါ်တဲ့ နာမည်ပြောင် ) မှလာသူများ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရမည်။
၁၉၄၈ မတ်လတွင် ဖဆ – ဆိုရှယ်အစိုးရက ကွန်မြူနစ်ချေမှုန်းရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ လက်တွေ့စစ်ဆင်ရေးလုပ်သူက အထက်ပါ စစ်ဦးစီးအဖွဲ့နှင့်တပ်များ ဖြစ်သည်။
တပ်ရင်းအားလုံးကို မသုံးနိုင်ပါ။ မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်မှလာသောတပ်များတွင် ကွန်မြူနစ်ဘက်ပါပြီး တောခိုသူခိုသည်။ ဆိုရှယ်လစ် တပ်မှူးများက ကွန်မြူနစ်ချေမှုန်းရေးလုပ်ရန် တက်ကြွသော်လည်း တပ်သားတပ်ကြပ်အများစုကို အမိန့်ပေး၍မရ။ နစ်နှင့်လစ် ပဋိပက္ခတွင် ကြားနေသူက အများစုကြီး ဖြစ်သည်။ (သတင်းစာများက ကွန်မြူနစ်ကို “နစ်” ဆိုရှယ်လစ်ကို “လစ်” ဟု ရေးကြသည်။)
မြေကျေးရှင်းတွင်လူကြီးလုပ်ရင်း ကားမှောက်ကွယ်လွန်သွားသော ပဲခူးပြည်သူ့ရဲဘော်အမတ်ဟောင်း တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်တင်အောင်က ““နစ်” ဝါဒကို မကြိုက်ဘူး။ “လစ်”ကိုတော့ မုန်းတယ်၊ တောမခိုဘူး – ပြည်တွင်းစစ်လည်း မကြိုက်ဘူး” ဟု ပြောသည်။ ထိုသဘောထား ရှိသူ များသည်။
စစ်ဦးစီးအဖွဲ့က ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ခိုင်းနိုင် သုံးနိုင်သော တပ်များမှာ “သခင်ကြီးတပ်” မှ လာသူများ ဖြစ်သည်။ သူတို့က အရင် ကတည်းက အထက်အောက်ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေပြီးသား ဖြစ်သည်။ အမိန့်နာခံသည့် “ကြေးစား” စိတ်ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုစိတ်ထက် ပိုပြီးပြင်းထန်တာက “လက်စားချေရေး” စိတ်ဓာတ် ဖြစ်သည်။
“လက်စားချေရေး” စိတ်မှာ အင်္ဂလိပ်ထားခဲ့သည့် သမိုင်းအမွေ ဖြစ်သည်။ အပြည့်အစုံပြောမှ ရှင်းမည်။ ။
၁၉၄၂ ခုနှစ်က ဂျပန်ထိုးစစ်ကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဖွဲ့ ပေးထားသည့်တပ်များ တပ်ပျက် သည်။ အနည်းစု ဗိုလ် အကြပ်တပ်သားများ အိန္ဒိယပါသွားသည်။ အများစုကြီးက လက်နက် ယူပြီး တပ်ပြေးများ ဖြစ်သွားသည်။ မိမိတို့၏ ဇာတိရပ်ရွာ ပြန်ကြသည်။ တပ်ပြေးများမှာ ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်းများဖြစ်သည်။ (အင်္ဂလိပ်က ရခိုင်၊ မွန်၊ ဗမာများကိုမယုံ၍ သေနတ်ပေးမကိုင် ဝံ့၊ စစ်သားလုပ်ခွင့်မပေး။ ၆ လက်မ အသွား ရှိသည့် ဓားမြှောင်ကိုပင် ကိုင်ခွင့်မပေး။ ပုန်ကန် လွန်း၍ဖြစ်သည်။ ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်းများမှာ “သာသနာအစစ်အမှန်” ခရစ်ယာန်ဘာသာ တွင်း သွတ်သွင်းပြီးလည်း ဖြစ်ရုံမက ရှေးခေတ် ဟောင်းတမ်းတပြီး “မင်းလောင်း သူပုန်” လုပ်စရာလည်း အကြောင်းမရှိ။ ထို့ကြောင့် ယုံသည်။ သေနတ်ပေးကိုင်ဝံ့သည်။)
အင်္ဂလိပ်အုပ်စိုးမှု တည်ငြိမ်နေလျှင် ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် ဂျပန်ထိုးစစ် ကြောင့် အင်္ဂလိပ်အုပ်စိုးမှု မရှုမလှ ကျဆုံးသည်။ ဂျပန်ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခုတုံးလုပ်သည်။
ဤတွင် အင်္ဂလိပ် “သခင်ကြီး” ၏ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ဂျပန် “မာစတာ” ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပဋိပက္ခကြွထသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်တို့၏ ဘီအိုင်အေ (BIA) နှင့် လက်နက်ကိုင်စစ်ပြေး ထိပ်တိုက် တွေ့ကြသည်။ ဂျပန်ကလည်း မြှောက်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ကရင် ဗမာ အဓိကရုဏ်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် ဖြစ်သည်။ အနောက်ဖျား ရခိုင်ဘက်တွင် ရခိုင် ကုလား အဓိကရုဏ်း ဖြစ်သည်။
မြောက်ဖျားတွင် ရှမ်းနီ ကချင် ပဋိပက္ခဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်တွင် ပလောင် ကချင် ပဋိပက္ခဖြစ်သည်။ ကရင် ဗမာ အဓိကရုဏ်းလောက်တော့ မကြီးကြပါ။
ကရင်ဗမာအဓိကရုဏ်းက လူနေ စိပ်သော ကရင်ဗမာရောနှောနေထိုင်ကြသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် ဖြစ်သည်။ စစ်ပြေး များသလို ဘီအိုင်အေ များသည်။ ဘီအိုင်အေတွင် လက်စားချေရေးစိတ်ဓာတ် ပြင်းပြသည်။ သို့ဖြင့် အလွန်အကျွံတွေ လုပ်သည်။ ဂျပန်ကလည်း အင်္ဂလိပ်တပ်ပြေး ချေမှုန်းရေးကို အတင်း အကျပ် လုပ်ခိုင်းသည်။ ဒွေးရောဥပဒ်ရော ဝင်မွှေသဖြင့် အဓိကရုဏ်းကြီး ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကရင်ဗမာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ အမြော်အမြင်ကြီးမားမှုကြောင့်သာ ခဏနှင့် ပြီးသွားသည်။ ဘီဒီအေ (BDA), (PBF) မျိုးချစ်ဗမာ့တပ်မတော်တွင် စောကြာဒိုးကို ရာထူးကြီး ပေးသည်။ (ဗမာစစ်အုပ်စုက စောကြာဒိုးကို နောင်တွင်လည်းနေရာပေး သည်ကို သတိပြုပါ။)
ကရင်ဗမာ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းမှာ ဂျပန် “မာစတာ” ခေတ်ကတည်း က ပြီးပြီးပျောက်ပျောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ “လက်စားချေရေးစိတ်ဓာတ်” ပြန်လည်နိုးကြွလာသည်မှာ အင်္ဂလိပ် “သခင် ကြီး” ခေတ် ပြန်ရောက်လာ၍ဖြစ်သည်။
စစ်ပြေးဘဝ အိန္ဒိယတွင် နေစဉ် ကပင် “လက်စားချေရေးစိတ်ဓာတ်”ကို စစ်ပြေးဘုရင်ခံအစိုးရက မွေးမြူပေးနေသည်။ ဘီအိုင်အေကြောင့် ခွေးပြေးဝက်ပြေး အသက် လု ပြေးခဲ့ရသည်ကို အခဲမကျေ။
ဘုံဘေဘားမား သစ်ကုမ္ပဏီ၊ ဘီအိုစီရေနံကုမ္ပဏီ၊ စတီးဘရားသားကုမ္ပဏီ၊ ဧရာဝတီရေကြောင်းကုမ္ပဏီစသည့် နယ်ချဲ့ ကုမ္ပဏီများမှ ဗမာစကားတတ် အင်္ဂလိပ် သခင်ကြီးများ အိန္ဒိယရောက်မှ စစ်ဗိုလ်များ ဖြစ်နေကြသည်။ ဗမာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူများ လုပ်နေကြသည်။ အင်္ဂလိပ်ကဖွဲ့သော ကချင် လဲဗီးတပ်၊ အမေရိကန်ကဖွဲ့သော ကချင် ရိမ်းဂျားတပ်တို့၏ဗိုလ်များ လုပ်နေကြသည်။ စစ်တော့ မတိုက်တတ်ကြပါ။ သို့သော် ထောက်လှမ်းရေး၊ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး၊ သိမ်းပိုက်နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ခံများ ဖြစ်နေကြသည်။ ဗမာပြည် ပြန်ရောက်လျှင် တို့ဗမာသခင်တွေနဲ့ နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေကို “လှလှကြီး လက်စားချေကြစို့”ဟု သွေးထိုးပေးသည်။
မြစ်ကြီးနားသိမ်းသောအခါ “သခင် သခင် သတ် သတ်” ဟု ကြွေးကြော်ပြီး ဝင် လာသည်။ တကယ်လည်း လက်စားချေသည်။ ဒေသခံသခင်များ အဖမ်းခံရသည်။
မန္တလေး၊ ရွှေဘို၊ မုံရွာ ရောက်သည် အထိ ထိုအတိုင်း လုပ်သည်။ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးတွင် ဘာမှမလုပ်ခဲ့သော နောင် အခါ ဖဆပလပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ဖဆပလ တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး လုပ်သော သခင်သာခင်သည် လက်စားချေမခံရရန် ရွှေဘို ကပြေးပြီး မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း ကွန်မြူနစ်ပါတီ တွင် ခိုလှုံနေရသည်။
လူထုဦးလှ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိတွင် လည်းကောင်း၊ လင်းယုန်မောင်မောင်၏ ဆောင်းပါးများတွင် လည်းကောင်း စစ်မြေပြင် အချုပ်စခန်းများတွင် ချုပ်နှောင်ခံရသော အကြောင်း ရေးထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ လက်နက်ကိုင်ပြီး ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး လုပ်နေသူများကလွဲလျင် ဘီအိုင်အေအားလုံး စစ်ကြိုခေတ် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးသမား အများ အပြား စစ်အချုပ်တွင် အဖမ်းခံရသည်။ စစ်ဆေးသူများမှာ ဗိုလ်ဖြစ်နေသော ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည်။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသာ မရှိ လျှင် “လက်စားချေပွဲကြီး” တပြည်လုံးတွင် ပေါ်မည်မှာ သေချာသည်။
ဗိုလ်အောင်ဆန်းကို အရေးယူဖို့ လုပ်ခဲ့သေးသည်။ တောင်ငူတွင် နယ်ချဲ့ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ကရင်နီလူမျိုး စောသန်းတင် အဖမ်းခံရသည်။ လူထုအုံကြွ လာမှ ပြန်လွှတ်ပေးသည်။
ပုံစံဟောင်းအတိုင်း အုပ်စိုးရန် ပြန်ဝင်လာသော အင်္ဂလိပ်မှာ ၁၉ ရာစု အင်္ဂလိပ် မဟုတ်တော့ပါ။ မဟုတ်နိုင်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် လွတ်လပ်ရေးပေးရသည်။ ဖဆပလ ကို အာဏာအပ်ရသည်။ လက်စားချေခွင့်မရခဲ့။ လက်စားချေရေးစိတ်ဓာတ် သွင်းပေးထား ခံရသောသူများ ဆတ်တငံ့ငံ့ဖြစ် ကျန်ရစ်သည်။
ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်လာသောအခါ လက်စားချေခွင့် ရသွားပါသည်။ ဗမာတပ်ရင်း များက မတက်မကြွဖြစ်နေသောအခါ ကရင် ကချင် တပ်ရင်းများက ဖဆပလအစိုးရခိုင်းတိုင်း လုပ်ကြသည်။
သူတို့တိုက်သည်မှာ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေးအတွက် မဟုတ်ပါ။ မဆင်နွှဲလိုက် ရသော လက်စားချေပွဲကို လုပ်ကြခြင်း ဖြစ် သည်။
လက်စားချေပွဲကို ကွန်မြူနစ်များ အပေါ်သာ သဲကြီးမဲကြီး လုပ်ကြပါသည်။ ဖဆပလ (ဘီအိုင်အေ၊ ပီဘီအက်ဖ် ) တခုလုံးကို မလုပ်နိုင်လျှင် ကွန်မြူနစ်များအပေါ် လုပ်ရနည်းသလားဆိုပြီး လုပ်ကြပါသည်။
စစ်ဆင်ရေး အမိန့်ပေးပုံကလည်း ဖြစ်ကတတ်ဆန်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖဆပလ အစိုးရက ဆိုရှယ်လစ်များပေးသည့်သတင်းကို အခြေခံကာ “ကွန်မြူနစ်များ” ဟု သတ်မှတ်ထားသော တောင်သူလယ်သမား သမဂ္ဂရှိရာ ရွာများစာရင်းကို စစ်ဦးစီးဌာနချုပ် သို့ ပေးသည်။ စစ်ဦးစီးဌာနချုပ်က ထိုရွာများကို ခဲနီတံဖြင့်ဝိုင်းပြထားသော မြေပုံအပ်ကာ ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ဂေါ်ရခါး တပ်များကို စစ်ဆင်ရေး လုပ်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်သော စစ်ဆင်ရေးအမိန့် ဖြစ်သည်။ လက်စားချေရေး စိတ်ဓာတ် ပြင်းပြသောတပ်များက မီးကုန် ယမ်းကုန် ကြမ်းသည်။ ချင်းတပ်များက (ဘီအိုင် အေခေတ် ရန်ငြိုးမရှိ၍) ဝတ်ကျေတမ်းကျေ လုပ်သည်။ ဂေါ်ရခါးတပ်များကတော့ စစ် စည်းကမ်းအတိုင်းလုပ်သည်။ ဂေါ်ရခါးတပ်၊ ချင်းတပ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရသောရွာများ သက်သာ သည်။ ကရင်ကချင်တပ်များနှင့်တွေ့သော ရွာများ ပြာကျသည်။ လူတွေအသတ်ခံရသည်။ အလယ်ဗမာပြည်မှရွာများ၊ အထက်ဗမာပြည်မှ ရွာများ မသက်သာကြပါ။
အကုန်ရှို့ အကုန်သတ် စစ်ဆင်ရေး ကြောင့် ဧရာဝတီတကြောတွင် ဟိုတပြောက် ဒီတပြောက် မီးခိုးဖုံးကာ သွေးညှီနံ့လွှမ်းခဲ့သည်။ မိန်းမများ ပျိုပျိုအိုအို မုဒိန်းကျင့်ခံရသည်။
အနိဌာရုံများကို အကျယ်မချဲ့ ချင်တော့ပါ။ ရဲဘော်နော်ဆိုင်း၏ မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ချက်ဖြင့် နိဂုံးချုပ်ပါမည်။ (ကွန်မြူနစ် ပါတီ ဝင်လိုသူတိုင်း မိမိတွင်ရှိခဲ့သော မှားယွင်း သည့် အတွေးအခေါ်များကို ပါတီသို့ ပုံအပ် ရပါသည်။ ဆန်းစစ်ချက် တင်ရပါသည်။ ဗိုလ်နော်ဆိုင်းမှ မဟုတ်ပါ။)
ရဲဘော်နော်ဆိုင်းက ဗမာတွေ အပေါ် လက်စားချေချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲ၊ ဗမာအစိုးရက ဗမာတွေသတ်ခိုင်း၊ ဗမာရွာတွေ မီးရှို့ခိုင်းတော့ ထင်တိုင်းကြဲ လက်စား ချေခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ထိုစဉ်က ဗြိတိသျှစစ်မစ်ရှင်ရှိသည်။ နုအက်တလီစာချုပ်အရ ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ “လက်စားချေပွဲ” တွင် သူ့ခြေရာလက်ရာ မည်မျှပါမည်ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ နေဝင်း – အောင်ကြီးသိပါလိမ့်မည်။ သူတို့က ဘာမျှ မပြောကြ၊ မရေးကြပါ။
ပြောသူတဦးတော့ ရှိပါသည်။ စစ် မစ်ရှင်အကြောင်း မဟုတ်ပါ။ “အားလုံးသတ် အားလုံးရှို့” ပေါ်လစီ ရှိခဲ့သည်ဆိုသည်ကို ဝန်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဩစတြေးလျတွင် အခြေချနေသော မောင်အောင်မျိုးဆိုသူက စာတမ်းတခု ပြုစုသည်။ ထိုအထဲတွင် အမေရိကန်အခြေချ ဗိုလ်ချစ်မြိုင်၏ပြောဆိုချက်များပါသည်။ ။
ဗိုလ်ချစ်မြိုင်က ဗိုလ်လက်ျာကို တပ် မတော်တခုလုံးကို ကရင်တွေ အုပ်စီးနေပြီ၊ ကရင်တပ်တွေက ဗမာရွာတွေကို မီးလောင် တိုက်သွင်းနေပြီ၊ အားလုံးသတ်၊ အားလုံးရှို့ လုပ်နေပြီဟုတိုင်ကြောင်း၊ ဗိုလ်လက်ျာက ကရင် တွေဘက်က ကာကွယ်ကြောင်း ရေးထားပါ သည်။
ဗိုလ်ချစ်မြိုင်အပြောအရဆိုလျင် – ကွန်မြူနစ်တွေထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသည်ဟု ဆိုသောလက်နက်များမှာ ကွန်မြူနစ်တို့၏ လက်နက်အစစ်အမှန်များမဟုတ်၊ လူသတ် မီးရှို့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ပြီး သက်သေပြသည့် အနေနှင့် အခြားမှလက်နက်များကို သက်သေခံ ပစ္စည်းအဖြစ် တင်ပြနေကြတာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
လူတွေသတ်၊ မီးတွေရှို့တာတော့ တောင်သူလယ်သမားတွေက သက်သေခံလိမ့်မည်။
ဗိုလ်လက်ျာက ထိုအရေးတွင် ဗမာ တပ်မှူးတပ်သားများအကြား နာမည်ပျက် သွားသည်။ နေဝင်းကနာမည်ကောင်းယူသည်။ ဉာဏ်များပြီး ကောက်ကျစ်သော ဦးကျော်ငြိမ်း စီမံရေးဆွဲကာ အမြဲတမ်းခိုးထုပ်ပိုးထည်နှင့် မိလေ့ရှိသူ မလည်ရှုပ် ဦးသိန်းဖေ (မြင့်) ရိုက်ကူး သည့် “လက်ဝဲညီညွတ်ရေး” ဇာတ်လမ်းတွင် နေဝင်းသည် လက်ဝဲညီညွတ်ရေး ခေါင်းဆောင် ကြီး ဖြစ်သွားသည်။
လက်ဝဲညီညွတ်ရေး “တပ်မတော် ၉ ဦးကော်မတီ” တွင်
၉။ ဗိုလ်စောထွန်းစိန်တို့ ပါကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို (၉) ဦးကို သတိပြုကြည့်စေ ချင်သည်။ သူတို့နောက်ကြောင်းတွေရေးလျှင် ရှည်နေလိမ့်မည်။ ဆိုရှယ်လစ်နာမည် ထွက်နေ သူ တယောက်မျှမပါ၊ ယခုတလော လူပြောများ သည့် (လူဖြူများက ပိုပြောသည့် ) တပ်ရင်း (၄) ကလူ တယောက်မျှ မပါ။ သူတို့က ဆိုရှယ်လစ်တွေဖြစ်နေ၍ မပါခြင်း ဖြစ်သည်။
နေဝင်းက မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူး အနေနှင့်ပါခြင်း ဖြစ်သည်၊ တပ်ရင်း (၄) ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ပါ။ ဗိုလ်ဇေယျက စစ်ဦးစီး (ပ) အဖြစ် ပါနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျန်လူများက တပ်ရင်း (၃) မှ ၃ ယောက်၊ တပ်ရင်း (၆) မှ ၂ ယောက်၊ တပ်ရင်း (၅) နှင့် တပ်ရင်း(၁) မှ ၁ ယောက်စီ ဖြစ်သည်။ တပ်ရင်း (၄) မပါ။
ဦးကျော်ငြိမ်းက ပါးသည်။ လည် သည်။ နေဝင်းကိုပဲ ပါနေစေသည်။ “နစ်” ကို သံယောဇဉ်တွယ်နေသူများ၊ ကြားနေများကိုပဲ လက်ဝဲထဲ ထည့်ပေးသည်။ အတိုချုပ်လျှင် ၊
ဗိုလ်ဇေယျ၊ ဗိုလ်ရဲထွဋ်တို့ တောခို ရသည်။ ကြားနေများ ဗိုလ်ချစ်မြိုင်၊ ဗိုလ်တင်ဦး (NLD ဗိုလ်တင်ဦးမဟုတ်)၊ ဗိုလ်တင်မောင် (မြတ်ထန်)၊ ဗိုလ်သောင်းကြည် (တခါက ကွန်မြူနစ်)၊ ဗိုလ်စောထွန်းစိန်တို့ကို (ဗိုလ် ဇေယျက နောက်ဖေးပေါက်ကနေ ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီးနေရာ တောင်းသည်ဆိုသော လုပ်ဇာတ်ဖြင့်) နေဝင်းဘက်သား ဖြစ်သွား စေသည်။
ဗိုလ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်လက်ျာ၊ ဗိုလ်ဇေယျစသူများမှာ ဗကသ (ကျောင်းသား သမဂ္ဂ) ဗဟိုမှလာသူများ ဖြစ်သည်။ တပ်တွင်း ဩဇာရှိကြသည်။ နေဝင်းလို မဟုတ်။ နေဝင်းကို တင်ချင်လျှင် ဗိုလ်ဇေယျကို ဖယ်ရမည်။
BIA. BDA. PBF အတွင်းမှ တပ်မှူးအများစုသည်လည်း နယ် ဗကသ များ ဖြစ်ကြသည်။ ဗိုလ်ထွန်းစိန် (အိမ်စောင့်ခေတ် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်) လို သမဂ္ဂ ဆန့်ကျင်ရေး သမား အနည်းအကျဉ်းသာ ပါသည်။
နေဝင်းကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး နေရာ အစိမ်းလိုက်ပေးလျှင် အောက်ခြေက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ရှိမည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် ပါးသော၊ လည်သော ဦးကျော်ငြိမ်းက ဦးနုကို အရင်ဆုံးစည်းရုံးသည်။ ဦးနုက နေဝင်းကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနေရာပေးရန် သေချာ သွားမှ (ဦးနု၏ တာတေစနေသားကြည့်) သူငယ်ချင်း ကွန်မြူနစ်ပျက် သိန်းဖေ (မြင့်) ကို အသုံးချသည်။
နေဝင်းကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး နေရာ ပေးချင်လျှင် ဗကသဟောင်း ဗိုလ်ဇေယျ ကို အရင်ဖယ်ရမည်။ ဗိုလ်လက်ျာကိုတော့ ဖယ်ပြီးပြီ။
ထို့ကြောင့် “လက်ဝဲညီညွတ်ရေး” ဇာတ်လမ်းဆင်သည်။ နေဝင်းကို ထိပ်တင် သည်။ တပ်မတော် (၉) ဦးကော်မတီတွင် ပါသူများမှာ ဗိုလ်ထွန်းစိန်ကလွဲလျင် ဗကသ ဟောင်းများချည်းဟု ဆိုနိုင်သည်။ နေဝင်းထက် ဗိုလ်ဇေယျနှင့် ပို၍နီးစပ်ကြသည်။
ဗိုလ်ဇေယျက ဗကသဟောင်း တဦးလည်းဖြစ်၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း အဖွဲ့က တဦးလည်းဖြစ်သည့် ဦးနုကိုယုံယုံကြည်ကြည် သွားပြီးပြောမိသည်။ နေဝင်းကိုကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး နေရာပေးလျှင် အောက်ခြေက ကျေနပ် မည်မဟုတ်ဟု ပြောမိသည်။ ဦးနုကို ဦး ကျော်ငြိမ်းနားသွင်းပြီးဟုသိလျင် ပြောမိမည် မထင်။
ဦးကျော်ငြိမ်းကတဆင့် နေဝင်း သိသွားသောအခါ သူ့အကွက်ထဲ ဝင်သွား ပြီဆိုသည်ကို နေဝင်းသိသည်။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ဇေယျနှင့် နှစ်ကိုယ်ကြားရှင်းနိုင်ပါလျက် မရှင်းဘဲ (၉) ဦးကော်မတီများရှေ့တွင် ဗိုလ် ဇေယျကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနေရာ နောက်ဖေးပေါက်က သွားတောင်းသူ ဖြစ်အောင် အပုပ်ချသည်။ “လက်ဝဲညီညွတ် ရေး” ဇာတ်လမ်းကို ဆက်မကဘဲ ရပ်ပစ်လိုက် သည်။
ဗိုလ်ချစ်မြိုင်၏စာများ၊ မြတ်ထန်၏ စာများကိုကြည့်လျှင် ဗိုလ်ဇေယျ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးနေရာတောင်း၍ (၉) ဦးကော်မတီ ပျက်ရသည်ဟု အခိုင်အမာရေးကြသည်။ ဗိုလ် ဇေယျကိုပယ်ပြီး နေဝင်းကိုသူတို့ သစ္စာခံ ကြကြောင်း ရေးသည်။
ဤနေရာတွင် နေဝင်း၏ လုပ်နည်း ကို တင်ပြမှ ပြည့်စုံမည်။ သူ့တသက်တာ လုပ်ခဲ့သည့်နည်း ဖြစ်သည်။ သူ့နည်းကို သူခိုးသေဖော်ညှိနည်းဟု ခေါ်နိုင်သည်။ ထိုနည်းကို နေဝင်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်သည့် သက်သေခံပစ္စည်း မဆလဌာနချုပ် လျှို့ဝှက် ဖိုင်တွဲများတွင် ရှိနေသည်။ (တစည က သမိုင်းဝင်ဖိုင်တွဲများကို ရှာဖွေလက်စဖျောက် ခြင်း မပြုရန် တောင်းပန်ပါသည်။)
ဖြစ်ပုံမှာ – ၁၉၇ဝ စုနှစ်များအတွင်း ခြွေရံသင်းပင်းအစုံအညီ ကတော်မယားများပါ ပုဂံသို့ နေဝင်းထွက်တော်မူသည်။ တညတွင် သီရိပစ္စယာဟိုတယ်၌ ကတော်များ အတင်း အဖျင်း ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေရာမှ သူ့ အကြောင်းပြောနေသံ တစွန်းတစ နေဝင်း ၊ ကြားလိုက်ရ၍ဆက်နားထောင်ရာ (ကတော် တချို့မှာ တခါက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ တကသဝင်များ ဖြစ်သည်) ၇ ရက်ဇူလိုင်ကိစ္စ ကို “ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူးမူးနဲ့အမိန့်ပေးတာ” ဟု ပြောကြသည်။ နေဝင်းတုန်လှုပ်သွားသည်။ ဒီကိစ္စလွှတ်ထား၍မရ၊ နှုတ်ပိတ်မှ ဖြစ်မည်ဟု သိလာခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်သောအခါ ၇ ရက်ဇူလိုင် အရေးအခင်းတွင် တာဝန်ယူ နှိပ်ကွပ်ခဲ့သော (အသံလွှင့်ရုံခန်းမမှာ နေပြီး အမိန့်ပေးခဲ့ကြသော) ဗိုလ်မှူးကြီးအားလုံးကို ဆင့်ခေါ်သည်။ “တကသ အဆောက်အဦကို ဖြိုချခိုင်းတာငါလား – ဗိုလ်အောင်ကြီးလား – မင်းတို့သိသမျှ စာနဲ့ရေးတင်ကြ၊ အခု သိပ်မကြာသေးဘူး။ နောင် မေ့သွားမယ်၊ မင်းတို့ မကွယ်မဝှက်ရေးကြ” ဟု အမိန့်ပေး သည်။
နေဝင်းကအာဏာရှိသူ အောင်ကြီး ကဘေးရောက်နေသူ နီးရာဓားပဲ ကြောက်ကြ မည်ကို နေဝင်းသိသည်။ ဘယ်လိုရေးကြမလဲ ဆိုတာပင် ကြိုတွက်ပြီး ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်စောမြင့်၊ ဗိုလ်လှဟန်၊ ဗိုလ်ကျော်စိုး စသဖြင့် အားလုံးက ရေးတင်သည်။ အမိန့်ပေးသူ အောင်ကြီးဟု ရေးကြသည်။ စစ်ဗိုလ်များအားလုံးကို ချည်ပြီး တုတ်ပြီး ဖြစ်သောအခါ မဆလဌာနချုပ်တွင် သီးသန့်ဖိုင်ဖွင့်ပြီး သိမ်းထားခိုင်းသည်။
ထိုသတင်းကို အောင်ကြီးက သူ့ နည်းနှင့်သူ သိသွားသည်။ ဖြေရှင်းချက်စာတမ်း အရှည်ကြီးထုတ်သည်။ အတော်ကို ပြည့်စုံ သည်။ သမိုင်းနှင့် ချီပြီးရေးသည်။ ထိုစာတမ်းကို အောင်ကြီးက လျှို့ဝှက်ပြီးဖြန့်သည်။ သူ့ စာတမ်း၏ သဘောအချုပ်မှာ နေဝင်းသည် စိတ်လိုက်မာန်ပါ မဆင်မခြင်အမိန့်ပေးလေ့ ရှိသည်။ သူကအမြဲဖာဖာထေးထေး လုပ်ရ သည်။ နေဝင်းကဒေါသနှင့် အမိန့်ပေးလျှင် အောက်ခြေက အချိန်ဆွဲထားရသည်။ စိတ် ပြေသွားလျှင်လည်း ပြောလို့ဆိုလို့ ကောင်း သည်။ သူ့အမိန့်ကို ပြန်ဖျက်လေ့ရှိသည်။ ယခင်ကဖြစ်ခဲ့သည့် ဥပမာများလည်း ရေးပြသည်။
ယခုကိစ္စတွင် နေဝင်း၏အမိန့်ကို ဗိုလ်ကျော်စိုးက ချက်ချင်းလိုက်လုပ်မိ၍ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦကြီး ပျောက်ပျက် သွားရသည်ဟု ဆိုသည်။ နေဝင်းကို အပြစ် မတင်ဘဲ ဗိုလ်ကျော်စိုးကို တရားခံလုပ်သည်။ အောင်ကြီးရှင်းတမ်း နိဂုံးချုပ်တွင် ဟောစာတမ်း တခု ရေးလိုက်သည်။ “ကျောင်းသားများ၏ အရိုးတွန်လိမ့်မည် ” ဟု ဆိုသည်။
အောင်ကြီး၏ ဟောစာတမ်း သွေးထွက်အောင်မှန်သည်။ ၁၉၈၈ အုံကြွမှု သည် အရိုးတွန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အရိုးတွန်ခြင်း သည် တချီနှင့်မပြီး ဆက်၍တွန်နေလိမ့်မည်။ နေဝင်း၊ အောင်ကြီးသေလို့ အရိုးဆွေး သော်လည်း ဤကိစ္စပျောက်ပျက်သွားမည် မဟုတ်။ တကသ အဆောက်အဦသစ်ကို ပြည်သူ့ငွေနှင့် တည်ဆောက်နိုင်သောအခါ ကမ္ပည်းကျောက်ပြားတခုဖြင့် တကသ အဆောက်အဦဟောင်း၏ သမိုင်းကို မော်ကွန်း တင် ထားရမည်။
တကသ အဆောက်အဦ ဘယ်သူ ဖျက်သလဲကိစ္စသည် နေဝင်း၏နောက်ဆုံး မိန့်ခွန်းတွင်ပင် ပါနေသည်။ အောင်ကြီးက မည်သို့ပင် “ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်စေဦး” နေဝင်းကတော့ အခဲမကျေကြောင်း ဤမိန့်ခွန်း က သက်သေခံသည်။ ဆရာတော်ကြီးတပါး၏ စကားကိုယူကာ “အောက်ရောက်မှ ဆက်ငြင်း ကြ” ဟု ပြောရတော့မည်။
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးခန့်ရေး ဇာတ်လမ်းက ရှုပ်သည်။ ဦးနုကသူ၏ တာတေ စနေသားတွင် ရေးသားချက်အရ နေဝင်းကို ခန့်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြဒါးလိုအပြောင်းအလဲမြန်သော ဦးနုသည် စိတ်ပြောင်းသွားသည်။ စစ်ဗိုလ်တယောက်၏ ခါးမှ သေနတ်ကိုမြင်ပြီး ငါ့ကိုလက်နက်နဲ့ အကျပ်ကိုင်တာပဲဟု ထင်နေဆဲ သိန်းဖေ (မြင့်) ၏ “ဗိုလ်နေဝင်းခန့်မလား၊ ဗိုလ်ဇေယျ ခန့် မလား ကိုကြီးနု သုံးရက်စဉ်းစားပါ” ဟူသော စကားကြားသောအခါ ဒေါသအိုးကြီး ပေါက်ကွဲ သွားသည်ဟု ဆိုသည်။ သုံးရက်မလိုဘူး အခုပဲပြောမယ်၊ ဘယ်သူ့မှ မခန့်ဘူးဟု ဖြစ်သွားသည်။ ဦးကျော်ငြိမ်းသယ်ထားသမျှ သဲထဲရေသွန် ဖြစ်ရသည်။
ဦးနုသည် တာတေစနေသား အဖွင့်တွင်ပင် သူ့အတွက်ကတုတ်ကျင်း တူးထားပြီးရေးခြင်း ဖြစ်သည်။ စနေ နေတက် ဖွားမို့ စိတ်တိုသည်။ နောက်မှတနံ့နံ့ နောင်တ ရတတ်သည်ဟု ရေးထားသည်။ အမှားအယွင်း ပြောမိလုပ်မိလျင် “စိတ်တိုတတ်လို့” ဟု ထုခြေနိုင်အောင် ရေးထားသည်။
မောင်မောင်၊ အောင်ကြီး၊ တင်ဖေ တို့ အမြောက်နှင့်ချိန်ပြီး အာဏာတောင်းတုန်း ကတော့ စနေ နေတက်သားကြီး ဇာတိမပြ ပါလား။ ဦးနုဇာတိက ပြတချက် မပြတချက်ဟု ဆိုရမည်။
ဗကသချင်းမို့ ဗိုလ်ဇေယျက ယုံယုံ ကြည်ကြည်လာပြောသည်ကို သစ္စာဖောက် မိသော ဦးနုသည် လိပ်ပြာမလုံခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တာဝန်ကို ဆိုရှယ်လစ် တွေအား မပေးဘဲထားခဲ့သည်။
မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း စစ်ဆင်ရေးကို သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးသည်။ သူ့စာအုပ်တွင် သူ့စွန့်စားခန်းများကို ဇာတ်ဆန်ဆန် ရေးထား သည်။ ဦးဝင်းက အဖော်အဖြစ်သာ ပါခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မည်သို့ဆိုစေ နေဝင်းသည် ကရင် တပ်များ တောခိုသောအခါ တပ်တခုလုံး သူ့လက်သူ့ခြေ လုပ်နိုင်သွားသည်။ စစ်တပ်၏ နံပါတ်တစ်နေရာသို့ ရောက်သည်။ သဲကြီးမဲကြီးစစ်တိုက်နေရသော ကာလဖြစ်၍ နံပါတ် တစ်သည် အာဏာသိပ်ကြီးသည်။ ယနေ့လို စစ်သိပ်မတိုက်ရသောခေတ်နှင့် မတူပါ။ တပ် ရင်း (၄) မှ လူများ နေဝင်းနံပါတ်တစ်ဖြစ်မှ နေရာရ တွင်ကျယ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိုလ် ကျော်ထင်၊ ဗိုလ်အေးကို စသည်များ တပ်ကြပ်မှ ဗိုလ်တွေ ဖြစ်လာသည်။ တပ်များအကြီး အကျယ် တိုးချဲ့ နေချိန်ဖြစ်၍ ရာထူးတိုးတာ မြန်သည်။ (တလက်ကိုင်တပ်ကို နေဝင်းနည်း လုပ်ရကြောင်းသိနေ၍ နဝတ – နအဖ တပ်တွေတရကြမ်း တိုးနေခြင်း ဖြစ်သည်) ၊
ဗမာပြည်အရေး ကျွမ်းကျင်သူဟု အမည်ခံနေကြသော လူဖြူများ (အမေရိကန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဆွီဒင် စသဖြင့် ရေးနေရလျှင်ရှည်၍ လွယ်အောင် လူဖြူများဟုပဲသုံးလိုက်သည်) သူတို့က ၁၉၅၈ ဖဆပလ အကွဲကြောင့် နေဝင်း လူတွင်ကျယ် ဖြစ်လာသည်ဟု ရေးကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီဘက်သားတချို့က ယုံကြသည်။ သံယောင်လိုက်ကြသည်။ မဟုတ် ပါ။ ၁၉၄၈ ကတည်းက ဦးကျော်ငြိမ်းတင်ပေး၍ တွင်ကျယ်နေပြီ။
ဦးကျော်ငြိမ်းမှာ ဦးဗဆွေနှင့်မတူ၊ သူ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်အရ ကြည်ညိုသော နောက်လိုက် စစ်ဗိုလ်မရှိ။ သူ့သမိုင်းကလည်း ရှိဖို့မလွယ်။ သူကအလုပ်ထက် အကွက်ကို အလေးထား သည်။ နေဝင်းကို တင်သည်မှာလည်း ဆိုရှယ် လစ်ဗိုလ်များ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နေဝင်းမှမတင်လျင် တခြားတင်စရာ လည်း မရှိ။
နေဝင်းတွင်ကျယ်လာပုံကိုကြည့်။ ဦးသိန်းဖေ(မြင့်) က လက်ဝဲခေါင်းဆောင်ကြီး အဖြစ်နှင့် အာဏာသိမ်းခိုင်းသည်။ ဦးဘဖေ (ကြီး)က လက်ယာခေါင်းဆောင်ကြီးအဖြစ် တိုင်းပြည်ကို “ကယ်တင်” ခိုင်းသည်။ ဦးကျော်ငြိမ်းက ဦးနုကိုအယုံသွင်းပြီး နေဝင်းကို ဗိုလ်လက်ျာနေရာရအောင် လုပ်ပေးသည်။
ဝဲ – ယာ သာမက ဦးကျော်ငြိမ်းလို လူကပင် အားထားရသောသူ ဖြစ်လာသော အခါ နေဝင်းမာနတက် ဇာတိပြလာတာ မဆန်း။ တပ်မတော်ကို ခင်ဗျားတို့ဝန်ကြီးတွေ ကာကွယ်ဖို့ ဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးဟု ပြောဝံ့ လာသည်။ ဝန်ကြီးများကို လူရှေ့သူရှေ့မရှောင် ကြိမ်းမောင်းဝံ့လာသည်။
၁၉၄၈ တုန်းက အမျိုးသား လုံခြုံရေးကောင်စီ (National Security Council) NSC ဖွဲ့ထားသည်။ ထို NSC ကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နေသူများမှာ စမစ်ဒွန်း၊ ဦးထွန်းလှအောင် (သူက အိန္ဒိယပြန်မဟုတ် ကင်ပေတိုင်ထောင်ပြန်ဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ် ပါတီက “ကင်ပေတိုင်” ထဲသွင်းထားသူ ယူဂျီရဲဘော်၏ ကျေးဇူးကြောင့် အသက်ရှင်လျက် လွတ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ သူပုလိပ်မင်းကြီး ဖြစ်သောအခါ ထိုယူဂျီရဲဘော်ကို ကျေးဇူး ဆပ်ပါရစေ အကြိမ်ကြိမ်ပြောနေသ ဖြစ်သည်) အခြားသူများမှာ စောရှီးရှိုး၊ စောကြာဒိုးနှင့် ဦးတင်ထွဋ်တို့ ဖြစ်သည်။ ဦးတင်ထွဋ်မှာ စစ်တိုက်သည့် အတွေ့အကြုံမရှိ၊ သို့သော် ဂေါ်ရခါးတပ်ကို ကိုင်ထားသူ ဖြစ်သည်။
ထို NSC က မျိုးချစ်ဗမာ့ တပ်မတော်ဟောင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော တပ်ရင်းအားလုံးကို လက်နက်ဖြုတ်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်ဟု မောင်အောင်မျိုးစာတမ်းက ဆိုသည်။ ဗိုလ်ဇေယျ၊ ဗိုလ်ရဲထွဋ်တို့က သိသွားသည်။ ဦးသိန်းဖေ(မြင့်)ကို ချဉ်းကပ် သည်။ နောက်မှ နေဝင်းကိုသိမ်းသွင်းသည်ဟု ဆိုသည်။
တပ်မတော်သမိုင်းပြတိုက်တခုလုံး မွှေနှောက်ကာ လျှို့ဝှက်စာတမ်းများဖတ်ပြီး စာတမ်းပြုစုနိုင်သော ဩစတြေးလျ အမျိုးသား တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်မောင်အောင်မျိုး၏ ရေးသားချက် ဖြစ်သည်။ ယုံသင့်မှယုံရန် ဖြစ်သည်။ မောင်အောင်မျိုးသည် ဩစတြေးလျ နှင့် နီးစပ်ဟန်ရှိသော မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးဌာနမှ ဗိုလ်မှူးကြီးသိမ်းဆွေ ၁၉၉၈ တွင်ရေးသည့် စာတမ်းကိုပင် ကိုးကားနိုင်သည် ကို တွေ့ရသည်။
လူမျိုးရေးအလံကိုင်ကြလျင် ဗမာ လူမျိုးကြီးအလံကိုင်သူက စားသွားမည် ဆိုသည်ကို သမိုင်းနှင့်ယှဉ်ပြီးရေးမှ လိပ်ပတ် လည်မည်ဖြစ်၍ ရှည်ရှည်မျောမျော တင်ပြ နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ကရင်တပ်များအားလုံး တောခို သောအခါ နေဝင်း၏ကံဇာတာ အတက်ဆုံး ကာလဖြစ်သည်။ နေဝင်းနှင့်အောင်ကြီး ထိုစဉ် ကတည်းကစပြီး တပ်တခုလုံးကို ချုပ်ကိုင် ခဲ့သည်။ မောင်မောင်က သုံ့ပန်းဖြစ်နေသည်။ တပ်မတော်ကို စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားနဲ့ဟု ပြောဝံ့သူ၊ အမေရိကန်ထွက်ပြီး “အာဏာ ဟူသမျှ နေဝင်းလက်အပ်” ဟု ကြွေးကြော်ရဲသူ အောင်ကြီးသည်လည်း နေဝင်းနှင့်အတူ ကံဇာတာတက်ခဲ့သည်။ မောင်မောင် လွတ်လာတော့ နေရာကောင်းရသည်။ CIA ၏လူလည်း လုံးလုံးဖြစ်သွားသည်။ နေဝင်းကို တနေ့အန်တုလာနိုင်မည့်သူ ဖြစ်လာ၍ နေဝင်းက မြန်မြန်ဖြုတ်ပစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အောင်ကြီးသည် ဆိုရှယ်လစ် ပါတီ၏ တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး လုပ်နေရာမှ ကာကွယ်ရေးဌာနအတွင်းဝန်၊ နောက်စစ်တပ်ထဲဝင်ကာ နေဝင်းလက်ထောက် လုပ်သည်။ နေဝင်းအပေါ် အောင်ကြီး သံယောဇဉ်ဘယ်တုန်းကမှ မပြတ်ခဲ့ပါ။ ၊
ဖဆပလ အစိုးရက နေဝင်း၊ အောင်ကြီးတို့ကို ၁၉၄၉ ဇန္နဝါရီအကုန် နောက်ဆုံးထားပြီး တပ်ရင်းအသစ်များ ဖွဲ့စေ သည်။ ထိုတပ်များကို BTF (Burma Territorial Force ) ဟု နာမည်ပေးဖွဲ့ရသည်။ ဗြိတိသျှစစ်မစ်ရှင်” ၏ ကန့်ကွက်မှုကို ကျော်လွှားရန် ဖြစ်ပုံရသည်။
ကရင်တပ်များ တောခိုပြီးမှ ဖွဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်က လက်နက်မရောင်းဘဲ ပိတ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ကပိတ်သဖြင့် အမေရိကန် ကလည်း မရောင်း၊ ဒုက္ခတွေ့နေစဉ် အိန္ဒိယ နေရူးအစိုးရက ကူညီသည်။
ကုလားလက်နက် လိုသလောက် ရ၍ BTF တပ်ရင်း အများအပြားဖွဲ့နိုင်သည်။ မေဂျာအောင်ကြီး “လဲဗီးဗိုလ်ချုပ်” ဖြစ်နေ သည်ကတော့ ခပ်စောစောက ဖြစ်သည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလက်အောက်တွင် လဲဗီး တပ်ရင်း (၁၈) ရင်းဖွဲ့သည်မှာ ၁၉၄၈ ဧပြီတွင် ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်ပင် တောမခိုသေး။ ပြည်သူ့ရဲဘော်က ဇူလိုင်ကျမှ တောခိုရခြင်း ဖြစ်သည်။
လဲဗီးတပ်ကို ဒေသအခြေခံကာ ဖွဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပဲခူး၊ အင်းစိန်၊ ဖျာပုံ၊ မြောင်းမြ၊ မအူပင်၊ ဟံသာဝတီ၊ သာယာဝတီ၊ ပြည်၊ သရက်၊ ပခုက္ကူ၊ စစ်ကိုင်း၊ ရွှေဘို၊ မုံရွာ၊ ထားဝယ်၊ ဟင်္သာတ၊ မင်းဘူး၊ မိတ္ထီလာ၊ တောင်ငူ စုစုပေါင်း (၁၈) ခရိုင်အခြေခံကာ ဖွဲ့သည်။ ကွန်မြူနစ် ချေမှုန်းရေးအတွက်ဖွဲ့သည့်
ဆိုရှယ်လစ်တပ်စစ်စစ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ ကလည်း လူတန်းစားရန်ငြိုးဖြင့် ရက်ရက် စက်စက် မီးရှို့၊ လူသတ် လုပ်သည်။
၁၉၄၉ ကာလက မိတ္ထီလာ၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း စသည်များတွင် သူတို့ပဲ ခေါင်းမာမာခုခံတိုက်သည်။
ချင်းတပ်ရင်းက ဝတ်ကျေတန်းကျေသာ ခုခံသည်။ (စကားချပ်။ သမိုင်းကိုခါးဖြတ်ပြောနေသော တတ်ယောင် ကား အနောက်တိုင်းသားများကြောင့်သာ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအကြောင်း တင်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗမာပြည်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ (ဗဆပ) ကို နေဝင်း (မဆလ) က မြောင်းထဲဆွဲခေါ်သွားပြီး ဖြစ်သည်။ သူတို့ မရှိတော့ပါ။) ၊
ကရင်က လူမျိုးရေးအလံထူပြီး တိုက်သောအခါ နေဝင်း၊ အောင်ကြီးတို့က “ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး” ကြွေးကြော်ကာ ဗမာလူမျိုးရေးအလံလွှင့်ပြီး လူစုသည်။ BTF တပ်ရင်းများ အလွယ်တကူဖွဲ့နိုင်သည်။
ကရင်က ကရင်လူမျိုးကိုသာ စည်းရုံးနိုင်သည်။ ကရင်နှင့်အိမ်ထောင်ကျသူ အခြားလူမျိုးကိုပါ စည်းရုံးနိုင်ဦးတော့ သိပ်မများ နိုင်၊ လွန်ရောကျွံရော ဗမာပြည်လက်ရှိလူဦးရေ သန်း ၅ဝ နှင့်တွက်လျှင် (အမေရိကန် နှစ်ချုပ်စာရင်းအရ ကရင် ၇၇ ရှိသည်ထားပြီး တွက်လျင်) ၃ သန်းခွဲ ရှိမည်။ ကရင်နှင့် အိမ်ထောင်ကျသူများကို ထည့်တွက်ဦးတော့ ၅ သန်းထက် မပိုနိုင်။ ကရင်တိုင်းကလည်း “ကရင့်တော်လှန်ရေး” ထောက်ခံကြသည် မဟုတ်။
ဗမာလူမျိုးက သန်း ၃၀ ကျော် သည်။ ယခု နအဖက ၄ သိန်းခွဲ တပ်သား စုထားနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။ ရိုင်ဖယ်ပေးနိုင်လျှင် ပေးနိုင်သလောက် ထပ်စု၍ရသေးသည်။ အာဏာကိုင်ထားသူဖြစ်၍ လခမပေးနိုင်မှာ မပူရ၊ ဝါဇီရှိနေသရွေ့ ပေးနိုင်သည်။ ထမင်း မကျွေးနိုင်မှာ မပူရ၊ လယ်သမားတွေ လယ်စိုက် နေသရွေ့ ကျွေးနိုင်သည်။ သာမန်လူတွေသာ ငတ်မည်၊ စစ်သားမငတ်။
လူမျိုးရေးအလံကိုထူပြီး အပြိုင် အဆိုင် တိုက်ကြလျင် ဗမာစစ်အုပ်စုက အသာစီးရမည်။ နအဖ၏ဗမာလူမျိုးရေးစိတ်က KNU ထက် ပြင်းထန်သည်။ လူမျိုးခြားနှင့် အိမ်ထောင်ပြုလျှင် ဗမာထဲက ငယ်စာရင်း ပယ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲကြည့်။
ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေကြီး မရန် ဘရန်ဆိုင်း (ကွယ်လွန်) က ကျွန်တော်တို့ကို တခါကတွက်ချက်ပြဖူး၍ လူနည်းစု အမျိုးသား တို့၏ စဉ်းစားပုံကို ကွန်မြူနစ်များသတိပြုမိခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်က ဖြစ်သည်။
| KIO – မဆလအစိုးရ ကျိတ်ဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲလုပ်သည်။ အပေးအယူတည့်သည်။ သဘောတူညီချက် (၁၇) ချက် (ထင်သည်) ရသည်။ အနှစ်သာရက လက်နက်ချရေး ဖြစ်သည်။ KIO က မဆလ အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံရမည်။ KIA ဖျက်ပြီး လက်နက်များ အပ်ရမည်။
နောက်မှစိစစ်ပြီး အစိုးရလုံထိန်း တပ်အဖြစ် ဖွဲ့ပေးမည်။ လက်နက်သစ် တပ်ဆင် ပေးမည်။ မဆလ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း ရပ်တည်ခွင့် မရှိသဖြင့် KIO ကို ဖျက်ပေးရမည်။ ကချင်ပြည်နယ် “ပြည်သူ့ ကောင်စီ” တွင် ခေါင်းဆောင်တချို့ ကို နေရာပေးမည် စသည့်အချက်များ ပါသည်ဟု မှတ်မိသည်။ မည်မျှအထိ အသေးစိတ်သနည်း ဆိုလျှင် KIO တွင်းမှ တောခိုကျောင်းသားများ အတွက်ပင် ပါသည်။ တောခိုမသွားမီက နေခဲ့ သည့် အတန်းထက် ၂ ဆင့်ကျော်ပြီး အအောင် ပေးမည်ဟု ပါသည်။ (၈) တန်းက တောခိုသွား သူသည် (၁၀) တန်းအောင်ပြီးသူ ဖြစ်မည်။ တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ် တက်နေသူဆိုလျှင် ဘွဲ့ရပြီးဖြစ်ရုံမက ဘွဲ့လွန်ပထမနှစ် အောင်ပြီး ဖြစ်နေမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် စစ်အုပ်စုက အလွန်လိုက်လျောတတ်ပါသည်။
ဤသို့ အပေးအယူတည့်နေ ကြောင်းကို (ဗကပ) ကြားပါသည်။ နေဝင်းနှင့် ပီကင်းတွင် တွေ့သောအခါ သေချာသွားသည်။
နေဝင်းက ဦးဘရန်ဆိုင်းမျက်နှာ မြင်လိုက်တာနဲ့ ဒီလူရိုးသားတယ်၊ အလုပ်ဖြစ် နိုင်မယ်ဆိုတာ တန်းပြီးသူသိလိုက်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် သူ့လူတွေကို အပေးအယူမျှကြဖို့ ညွှန်ကြားရကြောင်း၊ ပီကင်းကပြန်လျှင် လက်မှတ်ထိုးပွဲ လုပ်ရုံသာကျန်ကြောင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်တဲ့အနေနဲ့ မဆလ ထိပ်သီးတွေအားလုံးတက်တဲ့ ထမင်းစားပွဲကြီး လုပ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်း ကရားရေလွှတ်ကြွားသည်။ (ဗကပ) ကဘာမှတ်ချက် မှ မပေးလိုက်ပါ။ –
ပီကင်းကပြန်လာမှ ဦးဘရန်ဆိုင်း၊ ဦးဇော်မိုင်းတို့ကို တွေ့လိုကြောင်း (ဗကပ) က ဖိတ်သည်။ သူတို့ပန်ဆန်းလာကြသည်။
အတိုချုံးလျှင် (၁၇) ချက်ဟာ လက်နက်ချရေးဖြစ်တာကို သူတို့သိကြောင်း၊ ရေရှည်တိုက်လျှင် ဗမာကကျန်ရစ်ပြီး သူတို့ ကချင်လူမျိုး မျိုးပြုတ်မည်ဖြစ်၍ လက်နက် ချရကြောင်း ပြောပါသည်။ သူတို့ ၏စဉ်းစားချက် မှာ – ဗမာက လူဦးရေသန်းပေါင်း ၃၀ ကျော် ရှိပြီး ကချင်က တသန်းပင် မရှိကြောင်း၊ စစ်တိုက်ရာတွင် ဗမာ ၁ဝ ယောက် – ကချင် ၁ ယောက်နှုန်း သေကြလျှင်ပင် ဗမာက သန်း ၂၀ ကျော် ကျန်ရစ်ပြီး သူတို့ကချင် မျိုးပြုတ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေရှည်စစ်ပွဲ မတိုက်ချင်တော့ကြောင်း ပြော ပါသည်။
KIO ၏ရှင်းပြချက်ကို ဗကပ က နားလည်မှုရှိပါသည်။ ဆက်ပြီးတောင့်ထားကာ တိုက်လျင် အခြေအနေကောင်း မုချပေါ်မည်။ ဗကပ က ဆက်တိုက်နိုင်ရန် ကူညီမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
သူတို့လက်ခံသွားပါသည်။ တဆက် တည်း သူတို့ မဒတထဲ ပြန်ဝင်မည်ဟု ပြော သည်။ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန် သွားချင်သည်ဟု ပြောသည်။ ဗကပ၏ထင်မြင်ချက် တောင်း သည်။
မဒတထဲဝင်တာ ကောင်းသည်။ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန် သွားချင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည်မှုနှင့် သဘောပေါက်မှု ရှိပါသည်၊ KIO မှာ လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်၍ လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပါဟု ပြောခဲ့သည်။
အဆမတန်အားနည်းသော လူမျိုး က အားကြီးသောလူမျိုးကို တိုက်နေရလျှင် အားကိုးတခုခုကို ရှာစမြဲဖြစ်သည်။ ခွဲထွက်ရေး ကြွေးကြော်စဉ်က အမေရိကန် ဆီးတိုး (SEATO) ကို အားကိုးဖူးသည်။ အင်္ဂလိပ် “တောင်တန်းသားမိတ်ဆွေများ” ကို ဆက် သွယ်ခဲ့သည်။ ထိုဆက်သွယ်မှုမှာ ဗကပနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့နေစဉ်ပင် အဆက်မပြတ်ခဲ့ပါ။ သူတို့က မပြောသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ သိနေသည်။ ဘာတွေရေးသည် ဆိုသည်ကိုပင် သိသည်။ ဗမာ့အောက်ပစ်မထားခဲ့ဘူးဆိုပြီး ခုတော့ဗမာကို လွတ်လပ်ရေးပေးပြီး ဗမာ့ အောက်ပစ်ထားတယ်ဟု စကားနာထိုးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (ဗမာပြည်အကြောင်း ရေးကြ သော “လူဖြူကျွမ်းကျင်သူ” များလည်း ထိုစာ များကို ဖတ်ဖူးဟန် ရှိသည်။) ၊
ဤကိစ္စကို မှတ်ချက်တခုရေးပြီး ရပ်ပါမည်။
(မှတ်ချက်) KIO က ၁၉၇၉ တွင် ဆက်တိုက် သဖြင့် အကျိုးမယုတ်ပါ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် ဗကပခွဲထွက်များ ဖောက်ခဲ့သောလမ်းကို သူတို့ လိုက်သည်။ (၁၇) ချက်ထက်သာသော အခွင့် အရေး ရခဲ့သည်။ လက်နက်မချရ။ KIO. KIA မဖျက်ရ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့် ရှိနေသည်။
မိမိတို့အတွင်းမှပင် ဗကပခွဲထွက် ငြိမ်းအဖွဲ့များပေါ်နေရာ KIO ငြိမ်းအဖွဲ့ လုပ်သည်ကို အပြစ်မပြောပါ။ တရုတ်နယ်စပ် တွင် အားလုံး “ငြိမ်း” ဖြစ်နေချိန် သူက ထီးထီးကြီး ဆက်တိုက်နေ၍ မဖြစ်ပါ။ သိပ်နာ သွားလိမ့်မည်။
ဗကပခွဲထွက် ငြိမ်းအဖွဲ့များကို သူတို့၏မူလနေရာသို့ ပြန်သွားသော “ရဲဘော် မှ မဟာမိတ်ဖြစ်သွားသူ” ဟု သဘောထား သလို KIO ကိုလည်း မဟာမိတ်များအဖြစ်ပင် သဘောထားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
SSPP. KIO တို့သည် ခွဲထွက်ရေး မှ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မူကို ပြောင်းပြီးပထမဆုံး လက်ခံသူများဖြစ်၍ ဗကပ က သံယောဇဉ်ကြီး ပါသည်။ ။
အထက်တွင်ရေးခဲ့သည်များမှာ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်များ မဟုတ်တော့၍ ရေးပါသည်။ နဝတ၊ နအဖ မသိချင်အဆုံး ဖြစ်နေသော ကိစ္စများ ဖြစ်သည်။
ဘုံရန်သူ ရှိပါသည်။ သို့သော် ဘာ ကြောင့်ရန်သူဖြစ်သလဲ ဆိုသည့်ကိစ္စတွင်ကား မတူကြပါ။ (ဗကပ) က စစ်အုပ်စု၊ စစ်အစိုးရကို စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးသော စစ်ဗျူရို ကရက် အရင်းရှင်များဖြစ်သောကြောင့် ရန်သူ ဟု သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သီးခြားတိုင်းပြည်” “ခွဲထွက် ရေး” ကြွေးကြော်သူများက ဗမာ `နယ်ချဲ့” များဖြစ်၍ ရန်သူဟုသတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြေခံချင်းပင် မတူကြပါ။
ကွန်မြူနစ်များက တနှစ်စောပြီး တောခိုသည်။ KNU ကပါ တောခိုလာသော အခါ တောထဲတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ရသည်။ သို့ သော် တောကကျယ်သည်။ သူ့စည်းကိုယ့်စည်း နေလို့ရသည်။ ၁၉၅၈ အထိ ထိုသို့ “ရှဉ့် လျှောက်သာ ပျားစွဲသာ” ပေါ်လစီ လုပ်လို့ ရသည်။
တပ်ပေါင်းစုစကားလည်း အများ အားဖြင့် ပြည်သူ့ရဲဘော်၊ အလံနီတို့နှင့် ပြောရ သည်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်နှင့် ဗကပ နီးစပ်သည်။ သူတို့လည်း ပြည်ထောင်စုဘက်သား၊ ဗကပ လည်း ပြည်ထောင်စုဘက်သား။ ၁၉၄၇ ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေမှာ ဗိုလ် အောင်ဆန်း ဦးဆောင်ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်သည်။ (ဗကပ) က ထောက်ခံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စု ပြဿနာတွင် မကွဲကြပါ။
အလံနီက လူမျိုးတမျိုး တိုင်းပြည် တပြည်စနစ်ကို လိုလားသည်။ ပြည်ထောင်စု မလိုချင်၊ သူက ကွဲအက်ရေး ခွဲထွက်ရေးသမား။ အလံနီဘာပြောနေနေ ကိစ္စမရှိပါ။ သူကလူထု အခြေခံမရှိ။ ဗကပ ဖြူလျှင် သူမည်းမည်။
(ဗကပ) က ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြောတော့ သူက “ကျွန် ပွဲစားကြီးသခင်သန်းထွန်း” ဟု ပြောသည်။
“သီးခြားတိုင်းပြည်” “ခွဲထွက် ရေး” သမားတို့ကတော့ ပြည်ထောင်စုစကား မကြားချင်၊ နားခါးသည်။ ပြည်ထောင်စုဟု ပြောမိလျှင် ဗမာနီနှင့် ဗမာညို တသံတည်းပဲဟု စွပ်စွဲသည်။
၁၉၅၈ – ၆၀ အိမ်စောင့်ခေတ်က မောင်မောင်၊ အောင်ကြီးတို့ KNU နှင့် တိတ်တိတ် ၃ ကြိမ်တိတိ ဆွေးနွေးသည်။ ဗကပ ကို ဦးတည်တိုက်ရန် KNU ကို စည်းရုံးသည်။ ၁၉၅၈ – ၆၀ သည် ဗကပ အတွက် အနာဆုံး ကာလဖြစ်သည်။ (ဗကပ က KNU အပေါ် ဘယ်တုန်းကမှ အကောက်ကြံခဲ့ဟု KNU ခေါင်းဆောင်ကို မကြာမီကပင် ပြောလိုက်သေးသည်။)
၁၉၅၈ – ၆ဝ မှာ ဗကပတို့ မွေးရာ ဇာတိနှင့်အောင်မြေကို လက်လွတ်ရသော ကာလဖြစ်သည်။ ဗကပ၏မွေးရာဇာတိသည် မင်းဝံတောင် ပဲခူးရိုးမဖြစ်သည်။ အောင်မြေသည် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း ဖြစ်သည်။ (မောင်မောင်၊ အောင်ကြီးတို့နှင့် KNU ဘာတွေကျိတ်ပြီး နားလည်မှု ရခဲ့သည် ဆိုသည်ကို သူတို့ပြောမှ ကောင်းမည်ဖြစ်၍ မတင်ပြတော့ပါ။)
ရှမ်းများက SSIA ဖွဲ့ လက်နက် ကိုင်တိုက်ပွဲတိုက်တော့ “ဗမာနီ နယ်ချဲ့တွေ ပြန်သွား” ဟု ရာဇသံပေးသည်။ သီးခြား ရှမ်းပြည်၏ နယ်နိမိတ်သည် မန္တလေးလွင်ပြင် အထိဟု ပြောသည်။ အနီးစခန်းအောက်ဘက် အထိ ဆုတ်ရမည်။ မဆုတ်လျှင် တိုက်မည်ဟု စာရေးသည်။ (ဗကပ) က ရှမ်းပြည်ရောက်နေ သည်မှာ ၁၉၄၉ ကတည်းက ဖြစ်သည်။ ဖဆပလ အစိုးရရှိသည့်နေရာမှာ တိုက်မည်၊ တိုက်နေသည်မှာ ကြာပြီ။ သူတို့သူပုန်ထမှ (ဗကပ) ကို မောင်းထုတ်သည်။ ခြောက်တိုင်း ကြောက်ပြီး ဖိတိုင်းပိလျင် တော်လှန်ရေးသမား မဟုတ်၊ ထို့ကြောင့် ထွက်မသွားပါ။
သူတို့က နယ်နိမိတ်ကိုသက်ညှာစွာ သတ်မှတ်တာဟု ဆိုသည်။ မန္တလေး၊ ပင်းယ၊ အင်းဝအထိ ယူလို့ရသည်၊ သမိုင်းရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ဗကပ နေစရာမရှိမှာစိုး၍ သက်ညှာ တာဟ ပြောသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ ဗကပ ရှမ်းပြည်မှမဆုတ်ရ။ တိုက်လည်းမတိုက် လိုက်ရပါ။
တိုက်ရသည်က KIO နှင့် ဖြစ်သည်။ စောစောက မတိုက်ရ၊ ၁၉၆၈ အရှေ့မြောက်ပိုင်းပေါ်ပြီးမှ တိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ တိုက်ရသည်မှာလည်း နိုင်ငံခြား ပယောဂ ပါသည်။ ။
နေဝင်းတကွက်မှား၍ တရုတ် အစိုးရ ဒေါပွသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးတို့ မှာလို နေဝင်းက ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်မိသည်။ တရုတ် ဆန့်ကျင်ရေးကို ယူနီဖောင်းချွတ် စစ်သား များနှင့် လုပ်ခဲ့သည်။ စစ်သားများကို စစ်ကား ဖြင့် သယ်လာ၊ ယူနီဖောင်းချွတ် လုံချည်ဝတ် စေပြီး အရက်တိုက်ကာ အဓိကရုဏ်း ဖန်တီး စေခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်က အမေရိကန်အန္တရာယ် သတိထားချိန်၊ အမေရိကန်က ဗီယက်နမ်စစ် ရှိန်မြှင့်ချိန်၊ နျူကလီယာဗုံးအသေးစား သုံးမသုံး ချိန်ဆနေချိန်၊ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးကြောင့် တရုတ်များ အကဲဆတ်နေချိန်နှင့် သွားတိုး သည်။
မကြုံစဖူး ဗကပ လက်နက် ဖောခြင်း သောခြင်း ရသည်။ မဟာမိတ်များကို တသောင်းဂဏန်း ရောက်လုနီးနီး ကူညီနိုင် ခဲ့သည်။ (အကူအညီ လက်ခံခဲ့သူများအားလုံး “ငြိမ်းအဖွဲ့” များ ဖြစ်နေခြင်း၊ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ၃ဝ နီးပါး ရှိပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့် တခါက ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ကို ဖွင့်ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။)
ပထမဆုံးရသည့် မဟာမိတ်ထဲမှာ KIO ပါသည်။ ထိုအခါက KIO ကို ဇော် ညီအစ်ကိုတွေ ခေါင်းဆောင်သည်။ ဇော်တူးက ဗကပထံမှ လက်နက်အကူအညီ ယူသည်။ ထိုင်းတွင်နေသောအစ်ကိုက ကွန်မြူနစ်ပေးတဲ့ လက်နက် ထမ်းရကောင်းလား “လက်နက်နီ”” ၊ မထမ်းနဲ့ဟု ညွှန်ကြားသည်။ (ခွဲထွက်သီးခြား တိုင်းပြည် ထူထောင်ချင်သူတိုင်း ထိုင်းအခြေခံ ကြသည်ချည်း ဖြစ်သည်။ ဟုတ်တာမဟုတ်တာ အပထား ကွန်မြူနစ်တရုတ် ဆန့်ကျင်လျင် လက်နက်ပေးမလိုလို လေသံပေးနေ၍ တနေ့ ရနိုးနိုး စောင့်နေကြသည်။ ရသည်ဟုတော့ မကြားဖူးပါ။ ရွှေငုံးမင်းအမြီးမျှော်ရင်းနှင့် အချိန်တွေသာ ကုန်ခဲ့ကြသည်။)
ဇော်ဆိုင်းအမိန့်ဖြင့် ဇော်တူးက နှစ်ဘက်သဘောတူညီချက်ကို တဖက်သတ် ဖျက်သည်။ ရထားသောလက်နက်တော့ ယူထားပြီး မော်စီတုန်းဩဝါဒ စစ်ရေး ၆ စောင်တို့ကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်။
ဗမာနီနယ်ချဲ့ သမားဟု ပြောသည်။ အကွက်ချောင်းနေသော မဆလ စစ်အုပ်စုက ဝင်ပြီး အမြတ်ထုတ်သည်။ ဗကပ တိုက်ရေး အတွက် အားပေးသည်။ ရိက္ခာ၊ ကျည် အနည်းအကျဉ်း ပေးသည်။ မလွှဲမရှောင်သာ စစ်တိုက်ရတော့သည်။ ယခင် ၁၉၆၈ မတိုင်မီက မတိုက်ခဲ့ရပါ။
ဇော်ညီအစ်ကိုများ တယောက်က ဗကပနှင့်တိုက်ရင်း ကျဆုံးသည်။ အကြီး နှစ်ယောက်က သူတို့ချင်းလုပ်ကြံတာ ခံရ သည်။ KIO တခုလုံး ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်သည်။ ဗကပ က မရန်ဘရန်ဆိုင်း၊ ဇော်မိုင်းတို့ကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ ဆက် တိုက်ရန် အားပေးသည်။ အကူအညီပေးသည်။
ကချင်က ထိုင်းနှင့်အဝေးကြီး။ နိုင်ငံခြားအမှီရှာလျှင် ကုလား၊ တရုတ်ပဲ မှီလို့ ရသည်။ သူများနှင့် မတူပါ။ ကုလားက သူ့က္ခ နှင့်သူ၊ အရှေ့မြောက်ဒေသတွင် စစ်တိုက်နေ ရသည်။ KIO ကို လက်နက်ပေးလို့ မဖြစ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဗကပထံမှ တရုတ်လက်နက် ယူရသည်။ KIO မှာ ထိုင်းတွင် လုပ်ကြံခံရပြီး ထိုင်းကိုမှီ၍ မဖြစ်။ ထို့ကြောင့် ဗကပနှင့် ပြန်ပြီး မဟာမိတ်ဖွဲ့ သည်။ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း လက်ခံသည်ဟု ဆိုသည်။
လက်နက်တွင် အဖြူအနီ မရှိ၊ ထမ်းမည့်သူသာ အဖြူအနီရှိသည်ကို KIO ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ သစ်က သိပါသည်။ သူတို့ မှာ ထိုင်းတွင်နေသူများ မဟုတ်ကြ၍ ယူရဲ သည်။ ထိုင်းတွင်နေလျင် လက်နက်အကူအညီ ယူလို့မဖြစ်။ ယူမိလျှင် ကမ္ဘာမီးလောင်မည်။
ဤသို့ဖြင့် လက်နက်အကူအညီ ထောင်ချီပြီး (ဗကပ) က ပေးသည်။ လက်နက် တို့၏သဘောမှာ ကျည်ဆန်ရှိရသည်။ လူ ထမင်းစားသလို သေနတ်က ကျည်ဆန်စား သည်။ မစားရလျှင် တုတ်လောက်ပင် အသုံး မကျ။ နှစ်စဉ် (ဗကပ) က ဖြည့်ကျည် ထောက်ပံ့ ရသည်။
လက်နက်ကို မပေးခင် (ဗကပ) က သင်တန်းပေးသည်။ သူတို့ဗဟိုကလည်း “သွားသင်တန်းတက်ကြ၊ ပြောသမျှ နားထောင်ခဲ့ကြ၊ ပြန်စောဒက မတက်ကြနဲ့၊ လက်နက်ထမ်း ပြန်ခဲ့ကြ” ဟု ညွှန်ကြား လိုက်သည်။ အများကတော့ နာခံသည်။ တယောက်ကတော့ သူတို့ဗဟို ညွှန်ကြားချက် ကို ဖောက်ဖျက်သည်။ တချီတမောင်း တိုက် ထားကြရ၍ မခံချိမခံသာ ဖြစ်နေပုံရသည်။ မအောင့်နိုင်။
ဗကပကို အစဉ်အဆက် ခေါင်း ဆောင်ခဲ့သူများအကြောင်း သင်တန်းပေး အပြီးတွင် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲ၌ “လောက မှာ သခင်ယေရှုတယောက်ပဲ ကြားဖူးသည်။ သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်စိုး၊ သခင်သိန်းဖေ၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်ဇင်၊ သခင်ဗသိန်းတင် မကြားဖူးဘူး” ဟု ခွတိုက်သည်။
သူမကြားဖူးတာ ဟုတ်ကောင်း ဟုတ်မည်၊ သူ့အဖေ သူ့အဖိုးခေတ်ကတော့ ဗမာပြည်မှာ လူအမြောက်အမြားဟာ မျက်နှာဖြူဘိုတိုင်းကို သခင်ခေါ်ခဲ့ဖူးသည် ဆိုသည်ကို သင်တန်းဆရာက ပြန်မပြော လိုက်ပါ။ မဟာမိတ်ပြု နေကြသည်ပဲ။
မဒတ၊ ဗကပ ပန်ဆန်းစည်းဝေးပွဲ
အထက်တွင် ဘရန်ဆိုင်းက မဒတ ထဲ ပြန်ဝင်မည်၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန် သွားမည်ဆိုသောကိစ္စ တင်ပြပြီးပြီ။ ဘရန်ဆိုင်း ထိုင်းဆင်းသည်။ မဒတ ထဲ ပြန်ဝင်သည်။ အင်္ဂလန်သွားဖြစ်သည်။ တခါက မက်လုံးပေး အလွန်သန်သော “တောင်တန်းသား မိတ်ဆွေကြီးများ” နှင့် သွားတွေ့သည်။ သူတို့ထဲက အများစုက ကွယ်လွန်ပြီ။ ဆရာကြီးချာချီ၊ ဘုရင်ခံဟောင်း ဒေါ်မန်စမစ်တို့ မရှိကြတော့။ ကျန်ရစ်သူများက (Lord) လော့ဘွဲ့ခံပြီး အထက်လွှတ်တော် အမတ်များ လုပ်နေသည်။ သူတို့နှင့် တွေ့သည်။ သူတို့ခေါင်းထဲ “ဗမာပြည်” မရှိတော့။ တောင်တန်းသားများကိုလည်း စိတ်မဝင်စား ကြတော့။ ဘရန်ဆိုင်း စိတ်ပျက်ရသည်။
အမေရိကန်သွားရန် ကြိုးစားသည်။ ကွန်မြူနစ်နှင့်မဟာမိတ်ပြုထားသူဖြစ်၍ အဝင် မခံ လှည့်ပြန်ခဲ့ရသည်။ စိတ်အပျက်ကြီး ပျက်လာသည်။
ဤအချက်များမှာ ဘရန်ဆိုင်း၏ ပြန်လည်ပြောပြချက်ကို ချုပ်ပြီးတင်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားအားကို မှီခိုလို့မရရင် ကိုယ့်ပြည်တွင်းပဲ အားကိုးတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ မဒတ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကြီးကို ခေါ်ကာ KIO ဌာနချုပ်သို့ ပြန်လာသည်။ ဌာနချုပ်ရောက်လျှင် တဖက်က မဒတအဖွဲ့ကို ဗကပနှင့်တွေ့ဖို့ နားချသည်။ တဖက်ကလည်း ဗကပကို မတနှင့်တွေ့ရန် တိုက်တွန်းနေသည်။
ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေ၏ တိုက်တွန်း ချက်ကို (ဗကပ) က လက်ခံသည်။ မဒတ အဖွဲ့ကို နားချ၍လည်း ရသွားသဖြင့် (ဗကပ) က ဖိတ်သည်။
မိမိ၏အောက်ခြေ အဖွဲ့အစည်းများ သို့လည်း ဗဟို၏ဧည့်သည်များ လာကြမည်၊ မိတ်ဝတ်မပျက်ဧည့်ခံကြ၊ သူတို့ထဲက တချို့ သွေးခွဲကြလိမ့်မည်။ ပြန်မတုံ့ပြန်ကြနဲ့ဟု ညွှန်ကြားထားသည်။
ပါတီကတွက်ထားသည့် အတိုင်းပင် သူတို့ထဲကအချို့ က ဗကပဒေသ ဝင်ကတည်း က သွေးခွဲရေး လုပ်သည်။ ကချင်၊ ကရင်၊ ကိုးကန့်၊ ပလောင်၊ ရှမ်း၊ ၀၊ အခါ စသည့် ပါတီ ကေဒါများကို ဗကပမှခွဲထွက်၊ သီးခြားအဖွဲ့ချုပ်များဖွဲ့ကာ မဒတ တွင်း ဝင်ကြဖို့ ပြောကြ ဆွယ်ကြသည်။
လူမျိုးစုကေဒါများကလည်း ဗဟိုသို့ အပြည့်အစုံ ကနဖြင့် အစီရင်ခံသည်။ ဗဟိုက မတုံ့ပြန်နဲ့ ဧည့်ဝတ်စောင်ဝတ်ကျေကြဟု ညွှန်ကြားသည်။ ပန်ဆန်းရောက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်နေချိန်တွင်လည်း ဤသို့ပင် သွေးခွဲမြဲ သွေးခွဲနေကြသည်။ ဗကပ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က လေသံဖြင့်ပင် မကန့်ကွက်ခဲ့ပါ။
ထိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ပါသူများ အသက် ထင်ရှား ရှိနေကြပါသေးသည်။ သူတို့ကို သက်သေတည်ပါသည်။ )
ဗကပ၏အခြေခံဒေသတွင် သူတို့ လုပ်သလိုမျိုး သူတို့ဒေသတွင် လုပ်ခွင့်ပြုကြ ပါ၏လော။ သူတို့၏ ပြောက်ကျားဒေသတွင် ခေတ္တလာပြီး ရန်သူ့ထိုးစစ်ရှောင် ခိုလှုံသူကိုပင် သတ်ပစ်ပါသည်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်မှာ ဘယ်သူ့အမိန့်ဖြင့် သတ်သည်ကို ပြောနိုင် သော်လည်း ၊ ရန်စကိုတိုစေလို၍ မပြောတော့ပါ။
ကွန်မြူနစ် ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်လျှင် ဆုချခံရလိမ့်မည်ဟု ထင်ယောင်မှားမှုများ တနေ့ပျောက်လိမ့်မည်ဟု သဘောပိုက်ကာ အောင့်အည်းနေခဲ့ပါသည်။ “ရန်သူအပေါ် ပြတ်သား၊ မိတ်ဆွေအပေါ် စိတ်ရှည်” ရေးသည် ဗကပ၏မူတခု ဖြစ်ပါသည်။ ။
DAB ဖွဲ့သောအခါ မိတ်ဆွေကြီး ဘရန်ဆိုင်းက ဗကပကို DAB တွင်း ပါဝင် စေချင်ခဲ့သည်။ ထိုင်းကနေ DAB ထဲ ပါမပါ မေးခဲ့သည်။
ဗကပ ပါလျင် အားမဖြစ်ဘဲ၊ အား ပျက်စေသလိုဖြစ်မည်။ ကွန်မြူနစ်ပါလာ၍ အမေရိကန်ဆီက လက်နက်အကူအညီ မရတာဟု ထင်ကြလိမ့်မည်။ မပါဘဲနေတာ ကောင်းသည်။ ဒါကြောင့် ဘေးကနေပဲ ဒီမို ကရေစီရေးလုပ်မည်ဟု အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီး မထားခဲ့၍ ဗကပ – မဒတ ပန်ဆန်းစည်းဝေးပွဲ အောင်မြင် ပါသည်။ စစ်ရေးတပ်ပေါင်းစုသာ ဦးတည်ခြင်း ဖြစ်၍ ပြဿနာပေါ်စရာ မရှိပါ။ ဗကပ၏ ပြည်ထောင်စုမူကို ရှင်းပြရန် တောင်းဆိုတာ တော့ ရှိသည်။ ဗကပတွင် လျှို့ဝှက်ပြီး ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲထားတာ ရှိသည်ဟု ပြောပြီးမေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗကပတွင် လျှို့ ဝှက်ရော ဗြောင် ရော ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) မရှိပါ။ အခြေခံဥပဒေဆိုသည်မှာ တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲရပြီးမှ သရဖူဆောင်းတာဖြစ်ကြောင်း၊ ယုန်မရခင် သံပုရာရှာကြလျှင် အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲတာပဲ အဖတ်တင်မည့်အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ သဘောပေါက်ဟန်တော့ မရှိ ပါ။ ဗကပ အနေနှင့် အာဏာမဲ့သူများ ရေးဆွဲ ထားသော အခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) ကိုလည်း မဝေဖန်ပါ။ ထောက်ခံစရာတွေ့လျှင် တော်သေး သည်။ ကန့်ကွက်စရာတွေ့၍ ကန့်ကွက်မိလျှင် အနည်းဆုံး အားနာစရာတော့ ကောင်းမည်။ ကွန်မြူနစ်ပျက် မိုးဟိန်းသည် သူတို့ခွဲရေး သမားချင်း တပ်ပေါင်းစုလုပ်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လိုက်၊ သမ္မတဖြစ်လိုက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလိုအလုပ်မျိုး ကွန်မြူနစ်များ လုပ်မည်မဟုတ်၊ လိပ်ပြာမသန့်။
တိုင်းပြည်တစည်းတလုံးတည်း ရှိရေးသည် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းရေး၏ အရေးကြီးတခု ဖြစ်သည်။ ခွဲထွက်ရေးသမား တွေလို လုပ်၍မဖြစ်။ ခွဲထွက်ရေးသမားကတော့ သီးခြားအခြေခံဥပဒေရေးရန် ဝန်မလေးသလို၊ ဖျက်ဖို့လည်း ဝန်မလေးပါ။
တိုင်းပြည်အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲမည့်ကိစ္စ၊ နယ်မြေပြည့်စုံတည်တံ့မှု ပျက်မည့် ကိစ္စ၊ ရန်တကျက်ကျက်ဖြစ်ပြီး တခြိမ်းခြိမ်း တိုက်နေရမည့် အဖြစ်သို့ရောက်မည့်ကိစ္စတွင် မည်သည့်အခါမျှ ဗကပ မပါခဲ့ပါ။ နောင်တွင် လည်း ပါမည်မဟုတ်ပါ။
အာဏာရှိသူစစ်အစိုးရက ရေးဆွဲ လျှင်တော့ ဝေဖန်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူတို့သည် အောင်ပွဲခံပြီးပြီဟု ယူဆ ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သရဖူဆောင်းပေးနေ၍ ဖြစ်သည်။
လက်တွေ့အာဏာ မရှိသော်လည်း လူထုက အာဏာအပ်ထားသော NLD က ရေးဆွဲလာလျင် ဝေဖန်စရာရှိ ဝေဖန်မည်။ ကြိုက်လျှင်ထောက်ခံမည်။ မကြိုက်လျှင် ကန့်ကွက်မည်။ ၁၉၄၇ ကလည်း ထိုသို့လုပ်ခဲ့ သည်။
ဗကပ၊ မဒတ စည်းဝေးပွဲ ဆုံးဖြတ် ချက် လက်မှတ်ထိုးတော့မည့်အခါ တကြိမ်နှင့်၊ အသံလွှင့်တော့မည့်အခါ တကြိမ် သေချာ အောင် KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို လက်မှတ်ထိုး၍ ဖြစ်မဖြစ်၊ အသံလွှင့်၍ဖြစ်မဖြစ် (၂) ကြိမ်မေးခဲ့သည်။
KIO. SSPP တို့မှာ အဓိက ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်တိုင်ပါနေ၍ မေးစရာ မလိုပါ။ NMSP ကလည်း နိုင်ရွှေကျင် ကိုယ်တိုင် စာရေးထားပြီး ဖြစ်သည်။ အသက်ကြီးနေ၍ သူကိုယ်တိုင် လိုက်မလာ နိုင်ကြောင်း၊ လွှတ်လိုက်သူကို အာဏာကုန် လွှဲလိုက်ကြောင်း ရေးထားပြီး ဖြစ်သည်။
KNU က ထိုသို့ မဟုတ်ပါ။ ခေါင်းဆောင်လာသူကလည်း ကရင်အမျိုးသား မဟုတ်၊ ရခိုင်အမျိုးသား ဖြစ်နေသည်။ အားနာနာနှင့် ခုရှုပ်မှနောင်ရှင်း ပေးရသည်။ “ဖြစ်ပါတယ်၊ ရပါတယ်”ဟု ဆို၍ အသံလွှင့် သည်။ KNU ဥက္ကဌက သူသဘောမတူဟု ကြေးနန်းပို့သည်။ သူ့လူကို ကြိမ်းသည်။ KIO ဇော်ဆိုင်းက သူ့ညီကိုကြိမ်းတာမျိုး ဖြစ်သည်။
တရားဥပဒေကြောင်းအရ ပြော လျှင် ကျွန်တော်တို့တွင် တာဝန်မရှိသော်လည်း အနေရအထိုင်ရ ကျပ်ပါသည်။ KNU ကိုယ် စားလှယ်ခေါင်းဆောင်များကိုတော့ အားပေး ခဲ့သည်။ စိတ်တော့ မကောင်းလှကြောင်း၊ ကြီးကြီးမားမား အပြစ်ပေးခံရမည်ဟု မထင် ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
နောက် KNU တွင်း ဘာဖြစ်သည် မသိပါ။ အမျိုးမျိုး ကြားရပါသည်။ မဒတ၊ ဗကပ စည်းဝေးပွဲအပြီး သိပ်မကြာလှ၊ ဗကပတွင်း “ခွဲထွက်ရေးများ” ဖြစ်သည်။ သူတို့သွင်းခဲ့ သောအပင်း တန်ခိုးပြပြီထင်ပြီး အပြေးအလွှား လာကြသည်။
ဗကပမှ ခွဲထွက်သည်မှာ အာဏာ ရမရ မသေချာသောအဖွဲ့တခုသို့ လွှဲပေးချင်၍ မဟုတ်၊ အာဏာရှိနေသောအစိုးရအောက် လွှဲပေးရန် ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အစိုးရ တက်နေနေ ထိုအစိုးရအောက် ရောက်ကြမည်။ နဝတ စစ်အစိုးရတက်နေ၍သာ သူ့အောက် ရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မဆလ၊ နဝတ၊ တစည၊ ဒီချုပ် မည်သည့်အဖွဲ့ ဖြစ်စေ အာဏာရနေလျင် ထိုအာဏာအောက် ရောက်ပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် ဗကပ၏ ထုတ်ပြန်ချက်၊ ရေးသားချက်များတွင် သံတမန် အသုံးအနှုန်း ဖြင့် “စစ်အေးခေတ် ကုန်ဆုံးခြင်း၏ အကျိုး ကျေးဇူး” ဟု သုံးခဲ့ပါသည်။ ။
ဖတ်စာဟောင်းများတွင်ပါသည့် ပုံပြင်လို ဖြစ်ပါသည်။
နွားချိုပေါ်နားမိသည့် ယင်ကောင်၏ အထင်ကြီးမှုမျိုး နဝတ၊ နအဖ အထင်ကြီး နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပုံပြင်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။
နွားတကောင် မြက်စားနေသည်။ မြက်စားရန့်လိုက်ခိုက် ယင်တကောင်က နွားချိုပေါ်နားခိုက် ကြုံသည်။ သူ့အလေးချိန် ကြောင့် နှာခေါင်းငိုက်စိုက် ကျသွားသည်ဟု ယင်ကောင်က ထင်သည်။ ထို့ကြောင့် ယင် ကောင်က သနားမိပြီး ခေါင်းမော့နိုင်အောင် ငါပျံထွက်သွားမည်ဟု စဉ်းစားကာ ပျံထွက်သွား သည်။ ထိုအခိုက် နွားကလည်း မြက်စားပြီး၍ ခေါင်းပြန်မော့သည့်အခိုက် ကြုံမိပြန်သည်။
ယင်ကောင်က သူ့ “ဝိတ်”ကို အလွန်အထင်ကြီးသွားသည်။ ကျေးဇူးတင် လည်း ခံချင်၍ ငါသနားလို့ပျံထွက်ပေးတာဟု ပြောသည်။ ထိုအခါနွားက မင်းနားတာလည်း ငါမသိ၊ မင်းပျံသွားတာလည်း ငါမသိ၊ ငါ့ဘာသာ မြက်စားနေတာပဲဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်ဟု ပုံပြင်က ဆိုသည်။
ဖုန်ကြားစင်းခွဲထွက်ပြီး မကြာခင် NLD ရွေးကောက်ပွဲနိုင်သည်။ အစိုးရဖွဲ့နိုင်တော့ မလိုလိုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် NLD သို့ စာရေးချဉ်းကပ်လိုခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ထံ အင်္ဂလိပ်လိုရေးမှ ရမည်ထင်သဖြင့် အင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးရန် အပူကပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ခွဲထွက်သူများမှာ တက်သည့်အစိုးရ တို့အစိုးရ လုပ်မည်ဆိုသည်ကို သက်သေပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအရ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်မရှိလျှင် ခိုင်မြဲသောတပ်ပေါင်းစု မရှိနိုင်ပါ။ တပ်ပေါင်းစု ယာယီဖွဲ့ရန်ပင် မလွယ်ပါ။ ပြည်တွင်းရေး ပေါ်လစီတွင်လည်း သဘောတူမှုမရှိ၊ ပြည်ပရေး ပေါ်လစီတွင်လည်းမရှိ ဖြစ်နေလျှင် ဘုံ လုပ်ငန်းစဉ် (မည်မျှပင် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေဦး) မရှိနိုင်ပါ။
ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး မအောင်မြင်သည်မှာ ထိုကိစ္စအဓိက ဖြစ်ပါ သည်။ ရေရှည်စစ် တိုက်နိုင်သည်မှာ သူက သူ့နည်း၊ ကိုယ်ကကိုယ့်နည်းဖြင့် ဝိုင်းတိုက် နေကြ၍ (ဘုံရန်သူ) ရှိနေ၍ ဖြစ်ပါသည်။ PVO သာ တောမခိုလျင်၊ RBA သာမပေါ်လျင်၊ KNDO သာ မပုန်ကန်လျင် ဗကပ အတော် အကျဉ်းအကျပ် ကျပါမည်။
နောက်တွင်လည်း SSIA. KIA. PSLO (ပလောင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့) ပေါ်ပါသည်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် ပိုများ ပါသည်။ ချင်းကပါ ပုန်ကန်လာပါသည်။ သို့ သော် ကိုယ့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကိုယ် ဖြစ်နေပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပပေါ်လစီတွေ သီးခြားဖြစ်နေ ပါသည်။
ဘုံရန်သူရှိရုံနှင့်မပြီး၊ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ် ရှိရပါမည်။
အမြော်အမြင်ရှိကြလျှင် စစ်အေး လွန်ကာလတွင် ဘုံလုပ်ငန်းစဉ် ရှိနိုင်သည်ဟု ထင်ပါသည်။
၁၉၄၈ တွင် မလွှဲမရှောင်သာ လွတ်လပ်ရေးပေးရတော့မည့် အခြေအနေတွင် ““တောင်တန်းသား မိတ်ဆွေများအဖွဲ့” အင်္ဂလိပ်အုပ်စိုးသူ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပေါ်သည်။ နာမည်ကျော် ချာချီကို အမှူးပြုပြီး ဘုရင်ခံဟောင်းဒေါ်မန်စမစ် ခေါင်းဆောင်သည်။ အင်္ဂဗျူရိုကရက်ကြီးများ ပါကြသည်။
“မိတ်ဆွေများ”က တောင်တန်း သားများကို အကူအညီပေးတော့မလိုလို ပြောသည်။ တောင်တန်းသားများကလည်း အကူအညီ ရတော့မလိုလို ထင်ယောင်မှားကြ သည်။
သို့သော် ခေတ်ကြီးက ပြောင်းခဲ့ပြီ။ နယ်ချဲ့ကမ္ဘာ့အခင်းအကျင်း ကုန်ဆုံးသွားပြီ။ နယ်ချဲ့များ နောက်ဆုတ်နေရပြီ။ အင်္ဂလန်တွင် ချာချီအစိုးရ ပြန်တက်တော့လည်း ဗမာပြည် ဘက် လှည့်မကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့က စူးအက်တူးမြောင်းအရှေ့ဘက် ခြေချစို့။
“အင်္ဂလိပ် တောင်တန်းသား မိတ်ဆွေများ” တဇာတ်သိမ်းခဲ့ပြီ။ ယနေ့ ပေါ် နေသည်က “ဗမာပြည်အရေး ကျွမ်းကျင်သူ ပါရဂူ” များ၏ “တောင်တန်းသား မိတ်ဆွေများ” အသစ်ဖြစ်သည်။ သူတို့က အာဏာပိုင်များ မဟုတ်၊ နိုင်ငံရေးပွဲစား၊ လက်သစ် စီအိုင်အေ၊ နိုင်ငံရေးဒေါက်တာ ရမ်းကုများ ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် ဘာတီး လင့်တနာဆိုသူ ပါသည်။
ဘာတီးလင့်တနာသည် အခြား “ပါရဂူ” များထက် တလုံးပိုရှူနိုင်သည်။ သူက “ပန်ဆန်းပြန်”။ သူပန်ဆန်းရောက်သည်မှာ မိတ်ဆွေကြီး ဘရန်ဆိုင်း၏တောင်းပန်ချက်အရ ရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စာအုပ်တအုပ် နှစ်အုပ်ရေးပြီး “ဗမာပြည်အကြောင်း ကျွမ်းကျင် သူပါရဂူ” လုပ်နေသူမှာ သူတယောက်တည်း မဟုတ်၊ များသည်။ သူတို့က စာအုပ်ရေးကြ သည်။
သူတို့ရေးသမျှက တောင်တန်း သားကို ချီးကျူးစရာ ရှာချီးကျူးသည်။ ဗမာဆိုလျှင် နီသောဖြူသာမရွေး ဆန့်ကျင် သည်။ ဘာတီးလင့်တနာ ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ပြန်လာတော့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်က သူ့ကို အင်္ဂလိပ် လို “ကျုပ်တို့တွေ့ကြပြီ” ဟု ပြောကြောင်း၊ တို အင်္ဂလိပ်စကားကို အလွတ်ကျက်ပြီးပြောဟန် တူကြောင်း ကျွန်တော်တို့ထံ စာရေးဖူးသည်။ ဗမာဆိုလျှင် နှိမ်စရာမရှိ ရှာပြီးနှိမ်သည်။
တောင်တန်းသားလည်းဖြစ်၊ ခရစ် ယာန်လည်းဖြစ်လျှင် သူတို့အတွက် ချီးကျူး စရာချည်း။ အင်္ဂလိပ်စစ်သားဟောင်းကြီးက စကော့တလန် ချိုင်းညှပ်လေသွင်းပုလွေ မှုတ်တာကိုပင် ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်သည်။ နယ်ချဲ့ လက်ကျန်ကို ထိန်းသိမ်းသဖြင့် ကျေနပ်သည်။
စစ်အေးလွန်ခေတ် “တောင်တန်း သား မိတ်ဆွေများ” အကြောင်းကို အဓိက ရေးချင်သည်မှာ ဤကိစ္စများ မဟုတ်ပါ။ သူတို့ လုပ်ပေါက်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုခြင်းသာ ဖြစ် သည်။
သူတို့ ဆေးမြီးတိုပေးခဲ့သည်၊ ပေး နေသည်။
“အကြမ်းမဖက်ရေး” ဆေးမြီးတို ကြောင့် ပျော့ပျော့ကျန်တော့သည့် လူနာကို ယခု “ရတဲ့ဈေးနဲ့ ထုတ်ရောင်း ချေးများမနေနဲ့” ဟု ဆေးမြီးတို ပေးနေကြပြန်ပြီ။ ရဲဘော်များ၊ မိတ်ဆွေများ သတိရှိကြစေချင်သည်။
ကျွန်တော်တို့တွင် အားနည်းချက် ရှိသည်။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးသတင်းကို ထို “ပါရဂူ”များထံမှ ယူနေရသည်။ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်များကလည်း လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့် မရှိ၍ လူသိများစေချင် သည့် နိုင်ငံရေးသတင်း၊ အသံလွှင့်ပေးစေချင် သည့် သတင်းကို သူတို့ကို ပေးနေရသည်။
တောင်တန်းသား မိတ်ဆွေ အဟောင်းဖြစ်စေ၊ အသစ်ဖြစ်စေ “ပြည်ထောင် စု ပြဿနာ” ကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်သူများ မဟုတ်ကြ။ သို့သော် သူတို့တွင်ကျယ်နေသည်။ ခြေရှုပ်နေသည်။ ခြေရှုပ်တာကနေ ခြေထိုးလိမ့် မည်။
၁၉၈၈ သည် အလှည့်အပြောင်းနှစ် ဖြစ်သည်။ အလှည့်အပြောင်းတခုမှာ “ခွဲထွက် ရေး” “သီးခြားတိုင်းပြည် ထူထောင်ရေး” ကို အဓိကလူမျိုးစု အင်အားစုများက အတိ အလင်းစွန့်ပယ်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ပြည်ထောင်စု ဘက်သားများ ဖြစ်သွားကြသည်။ ခွဲထွက်ရေး၊ သီးခြားတိုင်းပြည် ထူထောင်ရေးကို ကရင်နီ တိုးတက်ရေးပါတီကပင် သိပ်မပြောတော့။ နော်ဝေးပြည် အော်စလို (OSLO) တွင် ပြောတာဖတ်ရသည်။ ပြည်ထောင်စုဘက်သား ဖြစ်လာသူတိုင်းကို ကြိုဆိုရမည်။
သူတို့က အဟောင်းနှင့် လုံးဝ မတူပါ။ အဟောင်းများက ဗျူရိုကရက်ကြီးများ သပ်သပ် ဖြစ်သည်။ ရှင်းသည်။ အသစ်က ဂျာနယ်လစ်၊ NGO ၊ လူ့အခွင့်အရေးသမား အရေခြုံထားကြသည်။ အစစ်အမှန်များ ကြားတွင် ရောနေသည်။ “နိုင်ငံရေးပွဲစား” “နိုင်ငံရေးရမ်းကု” များ လုပ်သည်။ သူတို့ အကြောင်းရေးရင်း ရှုပ်နေတာများလည်း ရှင်းချင်သည်။
ဗကပ ယူဂျီ ၄၈၂၈ ကို ဖမ်းမိတော့ ဗိုလ်ခင်ညွန့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ ကမန်း ကတန်း လုပ်သည်။ လုပ်သည့်ရည်ရွယ်ချက်က ရှင်းသည်။ သူလည်း ပြောထားပြီးဖြစ်၍ ရေးစရာမရှိပါ။ သူ၏ဖုံးကွယ်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်ကိုသာ ရေးမည်။
ကွန်မြူနစ် ဆန့်ကျင်ရေးသည် အမေရိကန်၏ သည်းခြေကြိုက်ဖြစ်သည်။ ဒါကို ဗိုလ်ခင်ညွန့်သိသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအချက်ကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။ တချက်ခုတ် နှစ်ချက် သုံးချက်ပြတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
– ဒီချုပ်သည် ဗကပနှင့်မကင်းဟု စွပ်စွဲရန် (ဤစွဲချက်မှာ အောင်ကြီးစွဲချက်နှင့်တူသည်။)
– နဝတသည် ဗကပကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်း နေသည်ဟု အမေရိကန်ကို သတင်းပေးရန်။
– ထိုင်းနယ်စပ်ရောက် ကျောင်းသားလူငယ် များကို မယုံနှင့်၊ ကွန်မြူနစ်အဆက်အသွယ်တွေ ဖြစ်သည်။ လက်နက်မကူညီနှင့်ဟု ဖြစ်သည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲစာအုပ်များကို ကြည့်လျှင် တွေ့နိုင်သည်။
လူထုအုံကြွမှုကြီး အရှိန်တက်နေလို့ က တက်ကြွသည့် လူငယ်များ (ရဟန်းသံဃာ တော်တော်များပင် ပါသည်) အတွင်း၌ ရလျှင်ရ – မရလျှင်ချ စိတ်ဓာတ်ရှိသည်။ ချလျင် လက်နက် လိုမည်။ “လက်နက် ထိုင်းနယ်စပ်တွင် ဂိုဒေါင် နှင့် အပြည့်ထည့်ပြီး စောင့်နေသည်။” အမေရိကန်က ပေးလိမ့်မည်။ အိန္ဒိယကလည်း တပ်မဟာ (၂) ခုဟာ လက်နက်ကူညီရန် ပြင်ထားသည်။ ချင်းတွင်းမြစ်အထိ ပို့ပေးမလိုလို သတင်းတွေဖြစ်နေသည်။ (ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့လည်း ကြားလိမ့်မည်။ ဟောပြောပွဲတွင် လည့်ဟောနေသည်ပဲ။)
ထိုထင်ယောင်မှားမှုဖြင့် ထိုင်းဘက် အထွက် များသည်။ အိန္ဒိယဘက် အတော် အသင့် သွားသည်။
ဗကပ၏သဘောထားမှာ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး၊ စစ်အစိုးရတိုက်ရေး အတွက်ဆိုလျှင် ဘယ်ကရရ ယူသင့်သည်။ မပေးလျှင် တောင်းရမည်။ ပါးစပ်နဲ့ ချည်း မကူပါနဲ့ လက်နက်ကူပါ ပြောရမည်။ လက်နက် ဟူသည် “အဖြူ – အနီ” မရှိ၊ လက်နက်ထမ်း သူသာ “အဖြူအနီ” ရှိသည်ဟု သဘော ထားပြီး သွားကြတာကို အားပေးခဲ့သည်။
မှန်းချက်နှင့်နှမ်းထွက် ပါ စင်အောင် လွဲသည်။ လိုအခါ ဗကပ “နိုင်ငံရေးဦးဆောင် အဖွဲ့” (နိုင်/ဦး) အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ထိုင်သည်။ တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်သည် မှာ
– ကျောင်းသားများ အမေရိကန်ဆီက မရလျှင် ဗကပ က ပေးရမည်။ လက်နက်ရလျှင် သူတို့ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းအခြေခံရန် သွားကြ လိမ့်မည်။ လူထုကလည်း ကြိုဆိုမည်။ လူထုနှင့် ခွဲခဲ့တာ မကြာသေး။
– ကိုယ့်တပ်ရှိလျှင် ကိုယ်လွတ်မြောက် နယ်မြေ ရှိမည်။ လူထုကိုမှီခိုလျင် အဝတ်အစား၊ ဘဏ္ဍာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး လုပ်နိုင်ကြမည်။ နဝတ၏အာဏာ မခိုင်မြဲသေးခင် ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်း အမြန်ဆင်းနိုင်ဖို့ လိုသည်။ ထို့ကြောင့်
– လက်နက်တသောင်းတိတိ ကူညီရန်၊ ကျောင်းသားတပ်ကို နာမည်ပေးချင်ရာပေး။ “ဒီမိုကရေစီ ပြည်ချစ်တပ်မတော် ” (DPA) ဆိုလျှင်ကောင်းသည်။ ကျောင်းသားများ အသက်ကြီးသွားလည်း ဒီနာမည်နှင့် လိုက်သည်။ ဖြန့်ခွဲထားသော ဂိုဒေါင်များ ထဲက ထုတ်ယူပြီး
အလွယ်တကူလာပြီး ထုတ်ယူနိုင်သောနေရာများတွင် စုစည်းထားရန်။
– ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးတုန်းကလို ပါတီက နိုင်ငံရေးမှူးများ တွဲပေးလိုက်ရန် ပြင်ဆင် သည့်အနေဖြင့် “DPA နိုင်ငံရေးသင်တန်း” တခု အမြန်ဖွင့်ရန်။
အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်၍ ဗဟို ကော်မတီစုံညီအစည်းအဝေးသို့ နိုင်/ဦး အဖွဲ့က တင်ပြသည်။
အများစုကြီးက လက်ခံသည်။ သို့သော် (နောင်အခါ ခွဲထွက်ကြမည့်) ဗဟို ကော်မတီအနည်းစုကလေးက မရဲတရဲ စောဒကတက်သည်။ နိုင်/ဦး အဖွဲ့၏ဩဇာကို လန့်၍ ဗြောင်တော့မကန့်ကွက်ရဲ။ ပါတီရဲ့ “ပြည်သူ့တပ်မတော် ရှိနေပြီပဲ – ကျောင်းသား တပ် ဖွဲ့စရာလိုသေးသလား” ဟု စောဒက တက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ (ခွဲထွက်တော့ ဗမာအိုကြီး တွေက ဗမာကျောင်းသားတွေကို လက်နက် ပေးမလို့ လုပ်တာကြောင့် ဆန့်ကျင်ရတာဟု သူ့အောက်ခြေသို့ ပြောသည် )
ဟုတ်သည်။ ပြည်သူ့တပ်မတော် ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့က ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းသို့ မဆင်းနိုင်၊ ၁၉၆၈ မှ ၁၉၈၈ ထိ အကြိမ်ကြိမ်ဆင်းဖို့ ကြိုးစားဖူးသည်။ မြစ်ဖျား ဘက်သို့ဆင်းရန် လုပ်စဉ်က KIO ခံနေသည်၊ စစ်တိုက်ရသည်။ နောက်မဟာမိတ် ဖြစ်ကြ တော့ သူတို့ ကိုမှီခိုပြီး ဆင်းသည်။ သတင်း ပေါက်နေသည်။ အခြေအနေမရင့်မှည့်သေး၍ အကျအဆုံးများကာ မအောင်မြင်ခဲ့၊ ကေဒါ ကောင်းအများအပြား ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၉ မှာ ကျွန်တော်တို့ အောက်ဘက်ကိုဆင်းလို၍ လမ်းပြပေးရန် သူတို့ကိုပြောတော့ သူတို့နှင့် န၀တ ကျိတ်ဆွေးနွေးနေသည်ကို မပြောပြဘဲ ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကို ပယ်ချခဲ့သည်။
အဓိကဆင်းချင်သည်မှာ ပါတီဗဟို ရှိရာ ပဲခူးရိုးမတောင်ပိုင်းနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝ ကျွန်းပေါ် ဖြစ်သည်။ အင်းလေး ပေါင်းလောင်း အထိ ဆင်းသွားဖို့ မှာလွယ်သည်။ ပြဿနာမရှိ။ တောင်ငူ – ကျောက်ကြီးလွယ်ကော်လမ်း၏ မြောက်ဘက်အထိလည်း ပြဿနာမရှိ။ (နေဝင်းဆီ အောင်ကြီးစာရေးစဉ်က သုံးနှုန်း သည့် “ဟိုချီမင်းလမ်း” ဖောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။)
ရန်သူက ထိုအကြံအစည်ကို သိသည်။ အပြင်းအထန် မီးကုန်ယမ်းကုန် ဖျက်သည်။ သခင်တင်ထွန်း၊ ဗိုလ်စိုးမောင်၊ ရဲဘော်လှမောင် (တောင်ငူ)၊ ရဲဘော်ဘမောင် (မုံရွာ) တို့ ရှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်းတွင် ကျဆုံး ခြင်း၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် သခင်ဇင်၊ သခင်ချစ် စသူတို့ကျဆုံးခြင်းမှာ ဗကပ၏ စီမံကိန်းကို ဖျက်ရန်လုပ်သည့် ရန်သူ့ ထိုးစစ်များတွင် ကျဆုံးခြင်း ဖြစ်သည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပြန်လည်ဖော်ထုတ် ရေးစီမံကိန်းကို ယူဂျီနည်းနှင့် စပြီးလုပ်သည်။ သစ္စာဖောက်ကြောင့် တပြုံလုံးရန်သူ့လက် ရောက်သည်။
လမ်းကြောင်းချောမောရန် တပ် ပေါင်းစုလုပ်ငန်းကောင်းအောင် လုပ်ရာတွင် တခြားအဖွဲ့များနှင့် ချောမောသော်လည်း KNU နှင့် မချောမော၊ ဆရာစကော လယ်တောတို့ KNUP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးရာတွင်လည်း အဆင်မပြေခဲ့ပါ။ အဆင် ပြေလျင် လက်နက်ထောင်နှင့်ချီပြီး ကူညီရန် ပြင်ထားသည်။ သူတို့က လက်နက်အကူအညီ ကိုပင် လက်မခံပါ။ သူတို့တွင်လည်း သူတို့ စဉ်းစားချက် ရှိပါလိမ့်မည်။
နောက်တော့ KNU တပေါင်း တစည်းတည်း ဖြစ်သွားသည်။ တပ်ပေါင်းစု စည်းဝေးပွဲ မရှိတော့။ မဒတ – ဗကပ ပန်ဆန်းစည်းဝေးပွဲကျမှ ပြန်တွေ့ကြသည်။
ပန်ဆန်းစည်းဝေးပွဲတွင် “မြို့ပေါ်မှာ လူထုအုံကြွမှု” ဖြစ်တော့မယ်ဟု (၂) ကြိမ် တိတိ ပြောခဲ့သည်။ အခိုင်အမာပြောလို့ မဖြစ် ၍ ဤမျှလောက်ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့ စိတ်မဝင်စားပါ။
“အောင်မာဃထိုးစစ် လာတော့ မယ်” ဟု သခင်စိုးကို ပြောဖူး၍ ဒုက္ခရောက် သည့် သင်ခန်းစာရှိသည်။ ဗိုလ်ကျော်ဇောကို ၊ မသင်္ကာဖြစ်ပြီး နေဝင်းက တပ်မှထုတ်သည်။ ထိုသင်ခန်းစာရှိနေ၍ စောင်းပါးရိပ်ခြည်သာ ပြောဝံ့သည်။ တိုက်ရိုက်ပြောလည်း စိတ်ဝင်စား မည့်ပုံ မပေါ်ပါ။
မဆလ၏ “ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေး စီမံကိန်း” ပိုလုပ်လေ – မှောင်ခိုဈေးကွက် ပိုကြီးထွားလေ – ဂိတ်ဖွင့်အခွန်ပိုကောက်နိုင် လေ ဖြစ်နေသည်။
အောင်ကြီးပြောသည့် “ဟိုချီမင်း လမ်း” ဖောက်ရေးကို ပြည်သူ့တပ်မတော်က လုပ်ရခက်သည်။ “ပြည်တွင်းစစ် ပြဿနာ” တွင် တင်ပြခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့တပ်မှာ ဝ များ၊ ကိုးကန့်များ၊ အခါများ၊ ကချင်များဖြင့် ဖွဲ့ထားရရာ တပ်သုံးစကားမှာ တရုတ်စကား ဖြစ်သည်။ ဗမာစကား မတတ်ကြပါ။ အတွင်း ပိုင်း ပိုးဝင်လျှင် စကားပြန်နှင့်သွားရသည်။ သွားရမည့်နေရာက ဗမာဒေသ။ KNU နှင့် တပ်ပေါင်းစုကလည်း မချောမောတော့ အခက် အခဲအလွန်များသည်။
အကြိမ်ကြိမ် လန်ကျလာသောအခါ ပြည်သူ့တပ်မတော် တပ်မှူးကြီး (ဝ အမျိုးသား များက ၀ တောင်တန်းမှာသာ တိုက်ခိုင်းပါ။ ဒီတောင်ကုန်း ရန်သူ့လက် မကျစေနဲ့ဆိုရင် မကျအောင် အသေခံတိုက်မယ်။ ဗမာဒေသ တွေတော့ စကားမပေါက် ဘာမပေါက်နဲ့ မသွားပါရစေနဲ့တော့ဟု တင်ပြကြသည်။
ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်နှင့် ဆွေးနွေးရင်း သူတို့က နည်းလမ်းတခုတင်ပြသည်။ လက်နက် ၂ လက် ထမ်းပြီးဆင်းမည်။ ဟိုမှာရှိတဲ့ ဒေသခံပြောက်ကျားတပ်ကို လက်နက်ပေးခဲ့ပြီး ပြန်လာမည်ဟု တင်ပြသည်။ “မြစ်ဝကျွန်းပေါ် စီမံကိန်း” မှာ ထိုအကြံအစည်ဖြင့် လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သူတို့တင်ပြချက်မှာ အလွန်အကျိုး အကြောင်း ဆီလျော်ပါသည်။ ဗကပ ဗဟိုကလည်း ကိုယ့်ဝမ်းနာကိုယ်သာသိသည်။ တသက်မှာ တခါကြုံမည့် အခါအခွင့်ပေးခိုက် ကြိုးစားချင်သည်။ ဗဟိုနှင့်တပ်မှူးကြီးများ ဤသို့ ပဋိပက္ခဖြစ်နေသည်မှာ နှစ်ချီပြီးကြာခဲ့ပြီ။ ။
ဗမာကျောင်းသားတွေကို လက် နက်တသောင်းပေးရေး ဆုံးဖြတ်သောအခါ ပဋိပက္ခအထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်တော့သည်။ လက်နက်တသောင်း မပေးနိုင်ခင် သူတို့က လက်ဦးမှုယူပြီး ခွဲထွက်ကြတော့သည်။ သူတို့ကို အနှစ် ၂ဝ တိုက်ခိုင်းခဲ့ပြီးမှ ဗမာကျောင်းသား တွေကို လက်နက်တသောင်း ပေးရမည်ကို နှမြောတွန့်တိုကြသည်မှာလည်း သဘာဝကျ ပါသည်။
ဤမျှရေးနေရခြင်းမှာ ပန်ဆန်းတွင် နှစ်ရက်တမွန်းတည့် နေခဲ့ရုံ၊ ဥက္ကဌနှင့်တွေ့ခဲ့ရုံနှင့် ဗကပ အကြောင်းနောကြေအောင် သိသူအဖြစ် ကြွားဝါနေသော ဘာတီးလင့်တနာဆိုသူ ပြောသမျှ အဟုတ်ထင်သူတချို့ ရှိနေ၍ ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ခင်ညွန့်က သူတို့နဝတ အကျိုး ကျေးဇူးအတွက် ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုကို ဗကပ လက်သို့ ထိုးအပ်သောအခါ ၄၈၂၈ နှင့် မဆက် သွယ်မိသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များက “ဗကပနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ ငါတို့လုပ်တာ” ဟု ဖြေရှင်းကြသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ဗကပ က ဆိုင်သည်ဟု မပြောခဲ့ပါ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်နေ တာပါ။ ဗကပ ကလည်း ဟုတ်နေလျှင်တောင် မပြောသင့်ဟု ထင်ပါသည်။
ကျောင်းသားများက ပြောမိလျှင် အမေရိကန်ထံမှ လက်နက်ရရေး မျှော်လင့်ချက် သာမက ငွေရရေးပါ လုံးဝပိတ်သွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် မပြောသင့်ပါ။ ပြောလျှင်ပင် မပြော သင့်ကြောင်း ဗကပ က အကြံပေးမည်။
နောက်တကြောင်းမှာ ထိုင်းနယ်စပ် တွင် ဗကပပါဟုပြောလျှင် သက်သာမည် မဟုတ်။ ခေါင်းကောင်း၍ ဓားတောင်းခြင်း ဖြစ်သွားမည်။
ကာယကံရှင် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ပြောသည်ကို ဗွေမယူပါ။ မဆီမဆိုင် ဘာတီးလင့်တနာက သူ့စာအုပ်တွင် ဗကပနှင့် ၁၉၈၈ အုံကြွမှုမဆိုင်ဟု အတော် ကလေး ရေးသည်။ စာအုပ်ထွက်ကတည်းက ဖတ်ရပါသည်။ အရေးမဟုတ်၍ အလေးမထား ခဲ့ပါ။
ယခုရေးနေသည်မှာ “လက်သစ် တောင်တန်းသား မိတ်ဆွေများ” ၏ အန္တရာယ် ကို သတိပေးလို၍ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် “အကြမ်း မဖက်ရေး” ဆေးမြီးတိုပေးပြီး ဒီမို ကရေစီ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို သား လျောစေခဲ့ပြီးပြီ။ ယခု ပျော့ပျော့သာ ကျန်သော လူမမာကို “ဈေးမကိုင်နဲ့ ရတဲ့ဈေးနဲ့ ရောင်း ထုတ်” ဟု ပေးနေကြပြန်ပြီ။ ဤဆေးမြီးတို စားမိလျှင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်တော့မည်။ နေဝင်း၊
အောင်ကြီးစစ်အုပ်စုကို မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ်ပြီး သုံးချောင်းထောက် နအဖ စစ်အုပ်စုကို အလဲထိုးရမည့်အချိန် ဖြစ်နေ၍ ဤသို့တင်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ (ဖွင့်ပြောရန် အချိန် ရောက်နေ၍လည်း ဖွင့်ပြောပါသည်။)
(၅) ၂ ဦး ၂ ဘက် အစွဲအလမ်းများ
ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ၀၊ ပအိုးဝ် စသဖြင့် လူမျိုးအားလုံးတွင် အစွဲအလမ်းများ ရှိကြသည်။ ခွဲထွက်ရေးဒီရေမြင့်ချိန်က ခွဲထွက်ရေးခေါင်းဆောင်များ၏ အစွဲအလမ်းကို အရင်တင်ပြမည်။ နောက်မှ ဗမာလူမျိုးကြီး ဝါဒီတို့၏ အစွဲအလမ်းကို တင်ပြမည်။ “ပြည် ထောင်စုမူ” ကို ပို၍ အန္တရာယ်ပေးသည်မှာ လူမျိုးကြီးဝါဒီ အစွဲအလမ်းဖြစ်သည်။ အခုအထိ ဒုက္ခပေးနေဆဲ ဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ – ၉၀ တွင် ခွဲထွက်ရေး ဒီရေက ကျသွားခဲ့ပြီ။ ဒီရေတက်ချိန်ကတော့ ဗမာဆို နီနီ၊ ဖြူဖြူ၊ ညိုညို၊ မည်မည်း မယုံရ၊ အားလုံး လည်သည်၊ လိမ်သည်ဟု စွဲလမ်း သည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်က အတွေ့အကြုံတခု တင်ပြမည်။ ရှမ်းခွဲထွက်ရေး ခေါင်းဆောင် တက္ကသိုလ်ပညာတတ် တယောက်နှင့် တပ် ပေါင်းစုကိစ္စ ဆွေးနွေးစဉ်က ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးသည်ဆိုတာထက် ခရီးသွားဟန်လွှဲ တွေ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူက စွဲချက်နှစ်ခု တင်သည်။
ပထမစွဲချက်။ ၁၉၄၇ အခြေခံ ဥပဒေသည် ဗမာ ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူများက ရှမ်းစော်ဘွား (ဥပဒေနားမလည်သူ) များကို လိမ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲသည်။ သူတို့မိဘများ ပညာမတတ်၍ အလိမ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်၊ သူတို့ ခေတ်မှာ အလိမ်မခံတော့ဟု ဆိုသည်။ အမှန် မှာ ဖဆပလနှင့်စော်ဘွား အပေးအယူ လုပ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ စော်ဘွားများသည် အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်၊ နယ်ပိုင်ဝန်ထောက်နှင့် ဈေးဆစ်ဖူးသူများဖြစ်၍ လည်ပါသည်။ သမ္မတ နေရာရအောင်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးနေရာများရအောင်၊ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ဘဲ အမတ် ၂၅ နေရာရအောင် လုပ်နိုင် သူများ ဖြစ်သည်၊ မအပါ။ အမတ် ၅၀ ရှိသည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ၅၀ရအောင် လုပ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ (စစ်အုပ်စုက ၂၅% သာ တောင်းနေခြင်းနှင့် ယှဉ်ကြည့်ပါ။)
ဒုတိယစွဲချက်။ ဗမာချင်း လက်ဝါး ချင်းရိုက်ပြီး လူမျိုးစုတွေကို လက်နက်ချအောင် လုပ်သည်။ ဤစွဲချက်က ပိုကြီးသည်။ ဗကပကို ဦးတည်သည်။
– သူ့အပြောအရ ၁၉၆၃ စေ့စပ် ဆွေးနွေးပွဲခေါ်တော့ SSIA ကိုယ်စားလှယ်များ သွားကြသည်။ ရန်ကုန်မရောက်။ လွယ်လင် လား၊ တောင်ကြီးလားမသိ အဲဒီက ပြန်ခဲ့ ရသည်။ သူတို့နှင့်တွေ့ရသူက ဗိုလ်တင့်ဆွေ (ထင်သည်။) မဆွေးနွေးရဘဲ လက်ချာ နား ထောင် ပြန်ခဲ့ရသည်။ မင်းတို့ ငါတို့ဟုသုံးပြီး လက်ချာရိုက်လွှတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဗမာချင်းဆွေးနွေးပွဲကျတော့ တန်းတူရည်တူ အကြီးအကျယ်လုပ်ပေးသည်။ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံသည်။ စာစောင် စာတမ်းတွေ ထုတ်သည်ဟု စွပ်စွဲသည်။ ရဲဘော် ဌေးနှင့် ဗိုလ်စောမြင့် တမြို့တည်းသား၊ ကျောင်းသားကြီးနှင့် ကျောင်းသားငယ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ဇေယျနှင့် ဗိုလ်လှဟန် တပ်မှူးကြီးတပ်မှူးငယ်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြတော့ စွဲချက်ကြီးတခု ထပ်ပြီးတင်သည်။
ထိုစွဲချက်မှာ ဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်း စာအုပ်ကြီးတွင် ကွက်လပ်များပါနေသည်။ ထိုကွက်လပ်များမှာ သူတို့၏ယုံကြည်ရသော အတွင်းပိုင်းသတင်းအရ ဗကပနှင့် တော်လှန် ရေးကောင်စီ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ညှိကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲသည်။ ဟန်တာသာမွှေးက လွဲပြီး လူမျိုးစုတွေအားလုံး တောထဲပြန်ကုန်ပြီ၊ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ၊ ဗကပ (ဗမာနီ ) က တောထဲပြန်သွားဖို့၊ လူမျိုးစုတွေကို နောက်တခါ တောမောင်းပြီး (ဗမာညို ) စစ်အစိုးရအောက် ရောက်အောင် တောမောင်းပေးဖို့ တိုင်ပင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲသည်။ (သခင်စိုးက “ကျွန်ပွဲစားကြီး” ဟု စွပ်စွဲတာမျိုးနှင့် ဆင် သည်။
မဟုတ်ပါဘူးဟု ပြောသော်လည်း မည်သို့မျှ ပြောမရ။ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ကိစ္စဖြစ်၍ သူ့ကို မဟုတ်ပါဘူးထက်လည်း ပိုမပြောနိုင်။ ဤသို့ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲပြီးသွားသည်။
မကြာခင်ကတော့ KNU ခေါင်း ဆောင်တဦးနှင့် မှာလိုက်ရသည်။ သူစွပ်စွဲသလို မဟုတ်ကြောင်း၊ ၁၉၆၃ ဆွေးနွေးပွဲ မစခင်ကတည်းက တော်လှန်ရေးကောင်စီနှင့် နားလည်မှု ယူခဲ့ကြောင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ အောင်သည်ဖြစ်စေ၊ ပျက်သည်ဖြစ်စေ သခင် ဗသိန်းတင်သည် ဗကပ ကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်ရှိရာ တရုတ်ပြည်သို့ ပြန်သွားမည်ဟု နားလည်မှု ယူထားကြောင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်သောအခါ ပြန်သွားရေးဆွေးနွေးကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်ပြည်က အထူးလေယာဉ် လာကြိုရေးကိစ္စပါနေ၍ သုံးဦးသုံးဖလှယ် ဆွေးနွေးရသလို ဖြစ်နေကြောင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ခါမှ အကြာကြီးဆက်ပြီး ဆွေးနွေးကြသည် မှာ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း မှာလိုက်ရသည်။ ဆွေးနွေးသည်ကလည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ၊ ခေါင်းဆောင်ချင်းဖြစ်နေ – အပြန်အလှန်လည်း အကြာကြီးဆွေးနွေးနေ – ဆွေးနွေးသည့် အတွင်းသဘောကိုလည်း ဖော်မပြောဘဲ ကွက်လပ်ထားနေ – ဆိုတော့ မသင်္ကာစရာ ကြီး ဖြစ်နေသည်။ သူတို့ မသင်္ကာဖြစ်တာ မဆန်းပါ။
စစ်အုပ်စုတွင် လုပ်နည်းတခု ရှိသည်။ ထိုလုပ်နည်းကို ယခုပိုပြီး လုပ်နေသည်။ ထိုလုပ်နည်းမှာ တော်လှန်ရေးအင်အားစုများ အတွင်း သံသယပွားအောင် သတင်းလိမ်ကို တမင်ပေါက်ကြားပေးသည့်နည်း ဖြစ်သည်။ (SSIA ခေါင်းဆောင်များ မည်သည့်နေရာက ထိုသတင်းလိမ်ရသည်ကို ကျွန်တော်တို့ ခန့်မှန်း နိုင်ပါသည်။ မပြောသင့်၍ မပြောတော့ပါ။)
SSIA နှင့်တော့ မတိုက်ခဲ့ရပါ။ KIA နှင့် တိုက်ခဲ့ရသည်။ စစ်အစိုးရက ဝင်ပြီးအမြတ်ထုတ်တာ အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရသည်။ “ငြိမ်းအဖွဲ့များ” ဖြစ်သောအခါ အချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးသည့်နည်း စစ်အုပ်စုက အကြီးအကျယ်လုပ်သည်။
အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွင် အတွင်း ပဋိပက္ခများရှိကြသည်။ ဗကပခွဲထွက်များ အတွင်း ရှိသလို မဟာမိတ်များအတွင်း၌လည်း ရှိသည်။ KIO အဖွဲ့အတွင်း ပဋိပက္ခပြင်းထန် နေသည် ဟုကြားရသည်။ ပါတီဗဟိုက မိမိ ရဲဘော်များအတွင်းရော၊ မဟာမိတ်များ အတွင်းမှာပါ ၊ ပြည်သူတွင်းပဋိပက္ခအဖြစ်နှင့် အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ပြီး ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရဖူးသည်။ စေ့စပ်ပေးခဲ့သဖြင့် ရန်/ငါ ပဋိပက္ခအဖြစ် မကူးပြောင်းခဲ့ပါ။
ငြိမ်းအဖွဲ့များခေတ်သို့ ရောက် သောအခါ စစ်အုပ်စုက ရန်/ငါ ပဋိပက္ခ အဖြစ်သို့ မရောက်ရောက်အောင် တွန်းပို့ သည်။ ဤသို့ဖြင့် ““ငြိမ်းအဖွဲ့” တချို့ ပျက်စီး သွားသည်။
သွယ်ဝိုက်မနေတော့ဘဲ ရှင်းအောင် ရေးမည်။
ဗကပ လက်ထက်က ကိုးကန့်၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ့်ခမ်း၊ နမ့်ဆန်၊ မိုးမိတ် ဒေသ များသည် မြောက်ပိုင်းဗဟိုဌာနခွဲအောက်က ဖြစ်သည်။ လူမျိုးစုံသည်။
ခွဲထွက်ကြတော့ အားလုံး ဖုန် ညီအစ်ကိုအောက်ရောက်သည်။ ဖုန်ညီအစ်ကို နှင့် ယန်ညီအစ်ကိုတို့ အတွင်းပဋိပက္ခ ကြီး သည်။ ပါတီထဲ သူတို့ရှိစဉ်ကတော့ ပါတီက ပြည်သူတွင်းပဋိပက္ခအဖြစ် အကြိမ်ကြိမ် ဖြေရှင်း ပေးခဲ့၍ ရန်/ငါ ပဋိပက္ခအဖြစ်သို့ တိုးပွား မသွားခဲ့။
“ငြိမ်းအဖွဲ့” ဖြစ်သောအခါ ပဋိပက္ခ ကို စစ်အုပ်စုက ဆွပေးသည်။ ဆွပေးဖို့လည်း လွယ်သည်။ သူဌေးဖြစ်လမ်း စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများဖြင့် ဆွပေးလို့ရသည်။ ဘိန်း မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းဖြင့်လည်း ဆွပေးလို့ ရသည်။ သစ်ကန်ထရိုက်၊ ကျောက်မျက် တူးဖော်ခွင့် စသည်များဖြင့် ဆွပေးလို့ရသည်။
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် ထောက်လှမ်း ရေး အတိုင်အဖောက်ညီညီလုပ်ကာ ပဋိပက္ခကို ဆွပေးသည်။ (ဗိုလ်မောင်အေး၊ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ပဋိပက္ခဟု ထင်ယောင်မှားသွားအောင် တမင် လုပ်ကြသည်။)
ဖုန်နှင့်ယန် ပဋိပက္ခမှာ (စစ်အုပ်စုက မြှောက်ပေး၍) အာဏာသိမ်းပွဲအထိ ဖြစ်သွား သည်။ ယန်ညီအစ်ကို အာဏာရသွားသည်။ ဖုန်တို့ ထွက်ပြေးရသည်။ မကြာပါ၊ ဖုန်တို့က ယန်တို့ကို ဖြုတ်ချကြသည်။ ငါးပျံတလှည့် ဗုံလုံတလှည့် ဖြစ်နေကြသည်။
ဤသို့ အာဏာသိမ်းပွဲ၊ တန်ပြန် အာဏာသိမ်းပွဲ ကိုးကန့်တွင် ဖြစ်နေသောအခါ ကချင်များ၊ ရှမ်းများ၊ ပလောင်များက မုံကိုး ဘက်တွင် သီးခြားထောင်ကြသည်။ သူတို့တွင်း၌လည်း အပြန်အလှန်အာဏာသိမ်းပွဲများ ဖြစ်သည်။ ဗကပလက်ထက်က အမျိုးသား များ ဦးစီးသည့် အများအပြားပါသည့် တပ် မဟာရှိသည်။ ထိုတပ်မဟာနှင့် ကိုးကန့်ပေါင်း ပြီး အာဏာသိမ်းရန် ကြံစည်ကြသည်။ အသေးစိတ် တင်ပြမည်။
အာဏာသိမ်းမည့်အကြောင်း အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကို လားရှိုးသို့ ကိုယ် စားလှယ်လွှတ်ကာ ထောက်လှမ်းရေးသို့ သွား ပြောသည်။ ထလရ က ထိုသတင်းကို တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်သို့ ပေးသည်။ လာပြောသူ ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း ဖမ်းထားလိုက်သည်။ သတ်ပစ်သည်ဟုလည်း ကြားရသည်။ မသေ ချာပါ။ ပြန်မရောက်တာတော့ သေချာသည်။
စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း အာဏာ သိမ်းပွဲလုပ်သည်။ လားရှိုးက မီးစိမ်းပြသည် ဟုထင်ပြီး လုပ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အာဏာ သိမ်းတပ်ကို နအဖတပ်က ဆွေးနွေးရန်ဟု လိမ်ခေါ်ပြီး ခေါင်းဆောင်၊ တရုတ်ခေါင်းဆောင် များ အပါ တတပ်လုံးကို သတ်ပစ်လိုက်သည်။
အာဏာသိမ်းခံရဆဲ ဖြစ်နေသည့် ကချင်ခေါင်းဆောင်များကိုကား ဆွေးနွေးရန်ဟု လိမ်ခေါ်ပြီး ဖမ်းသည်။ တပ်ကိုလက်နက်ဖြုတ်ပြီး တပ်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ၂ ဘက် စလုံး ချေမှုန်းခံလိုက်ရသည်။
သေသွားသူများရော အဖမ်း ခံရသူများပါ သူတို့ခံရတာ ဗိုလ်ခင်ညွန့် မသိ လိုက်ဘဲ ဗိုလ်မောင်အေးက လုပ်တာဟု ထင်သွားကြသည်။ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်သာသိလျှင် ထိုသို့မဖြစ်ဟု ထင်နေကြသည်။ မဟုတ်ပါ။ ဗိုလ်မောင်အေး၊ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ သတိပြုသင့်သည်မှာ ထောက်လှမ်းရေး၏တာဝန်မှာ ထောက်လှမ်း ရန်သာဖြစ်သည်။ သူတို့က လက်နက်မဲ့ ရွာသားနှင့် မြို့ပေါ်မှယူဂျီ ဖမ်းနိုင်သည်။ သူတို့ ခြေနိုင်လက်နိုင်ဆိုလျှင် သူတို့လုပ်လိမ့် မည်။ လက်နက်အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ထား သော ၊ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ဝနေသော တပ် တတပ်ကို ချေမှုန်းချင်လျှင် သူက ထောက်လှမ်း ရေး သတင်းပေးပြီး စစ်တပ်ကိုင်ထားသူ တပ်မှူးကိုသာ တင်ပြရသည်။
ထလရ ဗိုလ်ခင်ညွန့်နှင့် တပ်မှူး ဗိုလ်မောင်အေး ပူးပေါင်းပြီး “စစ်ဦးစီးမှူး” လီညီမွန်၊ “ပြည်သူ့အသံ” ကိုရဲအောင်ဦးစီး သည့် အင်အားသုံးလေးရာတပ်ကို တယောက်မကျန်လုပ်ကြံ ချေမှုန်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်အစအဆုံးသိသည်။ “ငြိမ်းအဖွဲ့” မှလက်နက်ကိုင်တပ်များ ဘယ်ရောက်ပြီး ဘာလုပ်နေသည်ကို အမြဲ ထောက်လှမ်းပြီး ဗိုလ်ခင်ညွန့်သို့ သတင်းပို့ နေရခြင်း ဖြစ်သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်နက်ကိုင်တပ် မပြောနှင့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များ၏ လှုပ်ရှားမှု တိုင်းကိုပင် ထောက်လှမ်းသတင်းပို့နေရသည်။ ၁၉၈၈ – ၈၉ က ဗိုလ်အောင်ကြီး၏လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်လှမ်းရေးက အစီရင်ခံတင်ပြပုံကို ဥပမာပြမည်။
အောင်ကြီး မေမြို့ သို့ ဘယ်ကားစီးပြီး ရောက်လာသည်။ ဘယ်မှာ တည်းသည်။ ဘယ်အချိန် မီးပိတ်ပြီးအိပ်သည် ထင်ရသည်။ မနက်ဘယ်အချိန် ထွက်လာပြီး ဘယ်သွား သည်။ ဘယ်သူ့ကို လက်ပြနှုတ်ဆက်သည်။ ဘယ်အိမ်ဝင်သည် စသဖြင့်ခြေလှမ်းတိုင်း၊ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို ထောက်လှမ်းရေးဗဟိုသို့ သတင်းပို့နေသည်။
ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော် (ဟောင်း) များက လားရှိုးသို့သွားပြီး ဘယ်လိုအာဏာ သိမ်းမည်၊ ဘယ်မှာတပ်တွေစုထားသည် ဆိုသည်ကို အသေးစိတ် ထလရသို့ သံတော်ဦး တင်ကြသည်။ ထိုသတင်းကို ဗိုလ်ခင်ညွန့်က သတင်းထိန်ချန်ထားချင်၍ မရပါ။ ဗိုလ် မောင်အေးကို ပေးရသည်။ ဗိုလ်မောင်အေးက တပ်စုစည်းကာ ချေမှုန်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လွယ်လှသည်။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ကာလက ဤမျှအထိနာသောဆုံးရှုံးမှုမျိုး မရှိခဲ့ဖူးပါ။ ကျွန်တော်တို့က တော်လှန်ရေး သံယောဇဉ်ဖြင့် နာကျည်းကြေကွဲရသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် အာဏာသိမ်း ကတည်းက စစ်အုပ်စုတွင်း ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး နေဝင်းက စနစ်တခု လုပ်ထား သည်။ တယောက်အလုပ် တယောက် ဝင် မစွက်ရ (ဘုရင်က နယ်စားပယ်စား ပေးသလို မျိုး)၊ ဝင်စွက်လျှင် သူ့ကိုပြော၊ သူကအရေး ယူမည်။ သူက ထလရများလားပြီးလည်း သတင်းယူသည်။ နံပါတ်တစ်လုပ်နည်းမှာ ဤအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်စောမြင့်ကို အောင်ကြီးနှင့် နီးစပ်သည်ဟု ထင်သောအခါ အမှုရှာ ထုတ်ပစ် လိုက်သည်။ မည်မျှပင်သန့်ရှင်းသူဖြစ်စေ အမှုရှာလို့ ရသည်ချည်းဖြစ်သည်။ ဒီချုပ်ဗိုလ်တင်ဦးအပေါ် အမှုရှာတာ၊ တခြား သူများအပေါ် အမှုရှာခဲ့တာကြည့်ပါ။
ခွေးကိုတော့ ခွေးမလေး၊ လူအို တော့ လူမလေး ဖြစ်သွား၍သာ အခုနေဝင်း ခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
နေဝင်းနည်းကို ဗိုလ်စောမောင်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ လုပ်ချင်လည်း လုပ်မရပါ။ နဝတ – နအဖခေတ်တွင် နယ်စားပယ်စားများသည် တိုင်းပြည်ချင်း ဆက်ဆံသလို မူကြီး (၅) ချက် အရ ဆက်ဆံနေကြသည်။ လီညီမွန်ကိစ္စတွင် ငြိမ်းအဖွဲ့တွေအကြား ဗိုလ်ခင်ညွန့် ဩဇာ ကျသည်။ မတတ်နိုင်။
ခွဲထွက်များသာမက အမေရိကန်၊ ထိုင်း အိမ်နီးချင်းအားလုံးက ဗိုလ်မောင်အေး သာ (in charge) ဖြစ်သည်ဟု သိသွားသဖြင့် ထိုင်းက ဗိုလ်မောင်အေးကို မရမကဖိတ်သည်။ သူပြန်လာတော့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်က ခွဲထွက်များကို ဝက်အူရစ် တင်းသည်။ သတင်းစာများတွင် UWSA. ဖုန်ကြားစင်း ညွှန်ကြားလွှာများ တွေ့လာရသည်။
ရှေ့တွင် ပြောခဲ့ပြီ။ ခွဲထွက် “ခေါင်းဆောင်” များသည် (တက်သည့်အစိုးရ တို့အစိုးရ လုပ်မည်ဟု) တင်ပြပြီးပြီ။ ယခု နောက်ပွင့်မည့် “မင်းဘုရား” ကိုးကွယ်ကြ လိမ့်မည်။
“ခွဲထွက် ခေါင်းဆောင်များ” ဟု သုံးပါသည်။ တဖွဲ့လုံးဟု မသုံးပါ။ ဤနေရာတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝေဖန်ရေးလုပ်ရမည်။ “ခွဲထွက် အောက်ခြေရဲဘော်များ” အပေါ် ပါတီက တာဝန်မကျေခဲ့ပါ။
အလွန်ပညာဆန်သော မာ့က်စ်ဝါဒ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို နားလည်လိုလျှင် စာတတ် ရသည်။ ကျွန်တော်တို့အနှစ်၂၀ အတူနေခဲ့ပြီး သူတို့ကို စာတတ်သူများ (၀စာ၊ ဗမာစာ၊ တရုတ်စာ ဘာစာမဆိုတခုခု) တတ်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ကျေးလက်တွင်အခြေခံလျှင် ပါတီ၏ အသွေးအရောင် (သတိမထားလျင်) ညံ့သွား တတ်သည်။ တပ်မှူးက ပဒေသရာဇ် အတွေး အခေါ်ဝင်ပြီး အောက်ခြေက ကျေးစိတ်ကျွန်စိတ် ဝင်တတ်သည်။ စာတခုခုတတ်အောင် သင် ထားလျှင် သူတို့ကျေးစိတ်ကျွန်စိတ် ဝင်ရန် ခဲယဉ်းသည်။ အချို့ သော ရဲဘော်ဟောင်းများ မူးယစ်ဆေးစွဲ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်ဖြစ်ဟူသော သတင်းများ ကြားရလေ ယူကျုံးမရ ဖြစ်ရလေ ဖြစ်၏။
ယခုလည်း အခြားနေရာများတွင် ထိုသို့အချင်းချင်း ရန်ငါပဋိပက္ခဖြစ်အောင်၊ အာဏာသိမ်းအောင် သွေးခွဲနေကြသည်။ သတိရှိသင့်ကြသည်။ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒ သမားများသည် လက်နက်ဖြင့် အန်တုဖူးသော မည်သည့်လူမျိုးစု တပ်ဖွဲ့ကိုမဆို အာဃာတ ထားသည်။ အခွင့်သာလျင် တပ်လုံးပြုတ် ချေမှုန်းလိုကြသည်ဟု သတိပေးလိုသည်။
“ငြိမ်းအဖွဲ့”များဖြစ်အောင် စီးပွားရေးမက်လုံးပေးပြီး သိမ်းသွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ စီးပွားရေးမက်လုံးသည်ပင် စစ်အစိုးရ၏ သွေးခွဲရေးလက်နက် ဖြစ်နေသည်။ မူးယစ်ဆေး – ဘိန်းလုပ်မလား၊ ကုမ္ပဏီထောင်မလား၊ ကျောက်တူးဖော်ရေး လုပ်မလား၊ သစ်ကွက် ကန်ထရိုက် လုပ်မလား၊ သတ္ထုတူးလိုင်စင် ယူမလား၊ ကားသင်းထောင်မလား၊ တိုက်ဝယ် မလားအထိ ထလရကို အားကိုးနေကြရသည်။ ထောက်လှမ်းရေးက လွယ်လွယ်သွေးခွဲ၍ ရနေသည်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ ဖဆပလခေတ်က ရှိခဲ့သည့် တောရှေ့နေအလုပ်မျိုး ထလရတပ်ဖွဲ့ တိုင်းက လုပ်သည်။ တောရှေ့နေသည် ဘာ ဥပဒေမှသင်မထား။ ဘာအာဏာမှလည်း မရှိ။ ဘယ်ကိစ္စ ဘယ်ရုံးသွားရမည်၊ လျှောက်လွှာ ဘယ်လိုတင်ရမည် သိသည်။ ဘယ်လိုအမှုမှာ ဘယ်သူအာဏာပိုင်သည်ကို သိသည်။
ထောက်လှမ်းရေးကလည်း တော ရှေ့နေလိုပဲ သိသည်။ အာဏာပိုင်ဝန်ကြီး ဌာနများသို့ သူကပဲ ဦးဆောင်ခေါ်သွားလေ့ ရှိသည်။ လိုသူကိုအားပေး မလိုသူကိုချောက်ချ လုပ်နိုင်သည်။ ဤနည်း “မက်လုံးပေးခြင်းနည်း” ဖြင့် သွေးခွဲနေသည်။
တောရှေ့နေဦးဆောင်ရသည်က ရွာသားအမှုသည် ဖြစ်သည်။ ထလရ ဦးဆောင် ရသည်က ဒေသအာဏာပိုင် ခွဲထွက်များ ဖြစ်သည်။ အာဏာပိုင်သူ ဖြစ်မှလည်း စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရန် အရင်းအနှီးရှိနိုင်သည်။
အရင်းအနှီး စုဆောင်းတာကတော့ ဘိန်း မူးယစ်ဆေးလုပ်ငန်းဖြင့် စုနိုင်သည်။ တိုတိုရှင်းရှင်းပြောလျှင် “လော်စစ်ဟန်လမ်းစဉ်” ဖြစ်သည်။ ကန်ထရိုက် လိုင်စင်ရှိလျှင် အစုစပ် ဝင်ချင်သူအများကြီး ရှိသည်။
လော်စစ်ဟန်ကို အောင်ကြီးတို့လူစု မွေးစဉ်က လော်စစ်ဟန်မှာ ကိုယ်ပိုင်လက်နက် ကိုင်တပ်ကလေးရှိသည့် သာမန်ဘိန်းသမား ဖြစ်သည်။ စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်နှင့်တွဲရင်း တပည့်ခံရင်း လုပ်ငန်းပေါင်းစုံလုပ်သော လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဖြစ်လာသည်။
“ငြိမ်းအဖွဲ့” ခေါင်းဆောင်များ ကိုလည်း စစ်အုပ်စုက လော်စစ်ဟန်ကို တွဲခေါ် သလို ခေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် “ငြိမ်း အဖွဲ့”နှင့် “လော်စစ်ဟန်” အခြေခံချင်း မတူကြပါ။ ကြီးမားသောကွဲလွဲချက် ရှိနေသည်။
ကွဲလွဲချက်ကိုသိရန် သမိုင်းကို လှန် မည်။ တချိန်က လော်စစ်ဟန်ရော ဖုန်ကြားစင်း ပါ ကိုးကန့်စော်ဘွားလက်နက်ကိုင်တပ်မှ ဖြစ်သည်။ နောက်ကျတော့ တယောက်က စစ်အုပ်စုနောက်လိုက် ဖြစ်သွားပြီး တယောက် က ဗကပတပ်ထဲ ရောက်သွားသည်။ ဗကပထဲ ရောက်တာ ခဏမဟုတ်၊ နှစ်၂၀ ကျော်သည်။
လားရှိုးရောက်သည့်ဗိုလ်များက လော်စစ်ဟန်ကို ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး အမာခံအဖြစ် မြှောက်စားကြသည်။ သူတို့ အကျိုးလည်းရှိ၍ အလွန်မြှောက်စားသည်။ သာမန်ဘိန်းကုန်သည်ကနေ သူဌေးကြီး ဖြစ်သွားသည်။
လော်စစ်ဟန်၏ဆရာက များ သည်။ ဗိုလ်အောင်ကြီးဦးစီးသည့် ဆိုရှယ်လစ် ဗိုလ်များကစပြီး နောက်ဆုံး လားရှိုးတိုင်းမှူး အထိ ဖြစ်သည်။ ထိုတိုင်းမှူးများ ဝန်ကြီးတွေ၊ သမ္မတတွေဖြစ်ကြတော့ လော်စစ်ဟန်၏ စီးပွားရေးအင်ပါယာ ကျယ်ပြန့်လာသည်။ လော်စစ်ဟန်သည် ၊ တယောက်တည်း၏ တပည့် မဟုတ်ပါ။ လားရှိုးရောက်သည့် ဗိုလ်တိုင်းက အင်္ဂလိပ်သစ်လုပ်ငန်း မန်နေဂျာ များ “ဘိုကတော်” လွှဲနည်းလွှဲသွားကြ၍ အားလုံး၏တပည့် ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ် မန်နေဂျာများသည် ဗမာပြည် စရောက်ရောက်ချင်း တောမယား ယူကြသည်။ လူမျိုးစု အမျိုးသမီးများ “ဘိုကတော်” ဖြစ်ကြသည်။ မန်နေဂျာဟောင်း ဘိလပ်အပြီးပြန်လျှင် နောက်ရောက်သည့် မန်နေဂျာသစ်ကို “ဘိုကတော်” အားလွှဲပေး ခဲ့သည်။ လက်ပြောင်းလက်လွှဲ အများကြီး အလုပ်ခံရသော “ဘိုကတော်”သည် ထိုဒေသ ၏ အကြီးဆုံးသူဌေး ဖြစ်ကျန်ရစ်သည်။ အရွယ် ကျသွား၍ “ဘိုကတော် ဖြစ်သွားလျှင် လည်း မပူပင်ရတော့ပါ။
လော်စစ်ဟန်ကိုလည်း စစ်အုပ်စု ဝင်များ ဘိုကတော်လွှဲသလို လွှဲပေးခဲ့ကြ၍ ဗမာပြည်တွင် အကြီးဆုံးသူဌေး ဖြစ်နေသည်။ (ဖုန်ကြားစင်းသည် လော်စစ်ဟန်ကို အားကျသည်၊ အမှီကောင်း ရသွားသူဟု ထင် သည်။ ဖုန်ကြားစင်းခွဲထွက်တော့ လော်စစ်ဟန် သားအဖ လာပြီး စစ်အုပ်စုနှင့် ခင်ညွန့်နှင့် အောင်သွယ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။)
ဗကပတပ်ထဲရှိစဉ်က ဖုန်ကြားစင်း ကို စစ်အုပ်စုက “ဖွတ်ကြားရှင် ́ဟု ခေါ်သည်။ “ငြိမ်းအဖွဲ့” ဖြစ်သောအခါ “ဦးဖုန်ကြားရှင် ” ဖြစ်လာသည်။ ဘယ်တော့ ဖွတ်ကြားရှင် ပြန် ခေါ်မည် မပြောတတ်ပါ။
“ငြိမ်းအဖွဲ့” ခေါင်းဆောင်များနှင့် စစ်အုပ်စု တူတာတခု ရှိသည်။ ၎င်းမှာ အာဏာ ကိုင်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အာဏာကိုအမိအရ ကိုင်ထားရ သည်။ အာဏာမရှိလျှင် ဘာမှမရှိနိုင် – ရှိထား တဲ့ စီးပွားရေးအားလုံး ဆုံးရှုံးရမည်ကိုသိ၍ အာဏာရထားသူက အာဏာကို လက် မလွတ်ရေး၊ အာဏာမရသူကလည်း အာဏာ ရရေး။ ဤပဋိပက္ခ အမြဲရှိနေမည်။ အာဏာ လက်လွတ်သွားသူက အာဏာပြန်ရရေး (နေဝင်း လုပ်သလို) ပဋိပက္ခလည်း ရှိသည်။
ကိုးကန့်၊ မုံကိုးအဖွဲ့မှာ ထလရကို မှီခိုနေရရာ ထလရက သူတို့အတွင်းရေးကို မသိချင်အဆုံး ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အချိန်ကျလာသောအခါ ပဋိပက္ခ ဘက်နှစ်ဘက် စလုံးကို ချေမှုန်းပစ်လိုက်သည်။ ဗကပ ဗဟိုက လုပ်ပေးသလို စေ့စပ်ပေးနေမည်မဟုတ်။
ယခုအထိ မုံကိုမှ လက်နက်ကိုင် လက်ကျန်များက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်မသိလိုက်လို့ ဖြစ်သွားတာ။ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးလုပ်လို့ ခံလိုက်ရတာဟု ထင်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု ကြားရ သည်။
သူတို့သည် ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒီ စစ်အုပ်စုနှင့် ၁၀ နှစ်ပဲ ဆက်ဆံခဲ့ရသူများ ဖြစ်သည်။ တန်းတူရည်တူလည်း ဆက်ဆံခဲ့ရခြင်း မဟုတ်၊ ညွှန်ကြားသူနှင့် ညွှန်ကြားခံ ဆက်ဆံရေး ဖြစ်သည်။ ဗကပ က နှစ် ၆ဝ ဆက်ဆံခဲ့သည်။ နှစ် ၆ဝ ဟိုဘက်ကလည်း ကျောင်းနေဖက်များ၊ တမြို့တည်းသားများ ဖြစ်သည်။ တချို့ဆိုလျှင် ဆွေမျိုးသားချင်း တောင် တော်ကြသည်။ သူတို့စစ်အုပ်စု အကြောင်း ဗကပလောက်သိသူ မရှိပါ။ ၁၉၄၇ ပင်လုံညီလာခံ ပျက်မလိုလိုဖြစ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်က ရှမ်းပြည်ကို သီးခြားတိုင်းပြည် အဖြစ် ဖွဲ့ပေးခဲ့လျင် တိုက်ပစ်ရမည်ဟု ပြောနေ ကြသူများဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်မှ ပြည်ချစ် ပုဂ္ဂိုလ်များကျေးဇူးကြောင့်သာ ပြည်ထောင်စု တခု ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အခါအခွင့်သင့်တိုင်း ကွန်မြူနစ်များက ထိုပြည်ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေမည် ဖြစ်သည်။
စစ်အုပ်စုသည် လူမျိုးစုများအပေါ် အစွဲအလမ်း ရှိသည်။ လက်နက်ကိုင်ပြီး အန်တု ခဲ့သူများအပေါ်တွင်ကား အစွဲအလမ်းသာမက ရန်ငြိုး ရှိသည်။ ဤအချက်ကို လူမျိုးစုတိုင်း မမေ့သင့်။
အကြီးဆုံးအစွဲအလမ်းမှာ အနော် ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်၊ အလောင်းဘုရား အစွဲ အလမ်းဖြစ်သည်။ နဝတ – နအဖ အစိုးရက အမွှမ်းတင်လွန်းသည်။ အနော်ရထာ၊ ဘုရင့် နောင်၊ အလောင်းဘုရားတို့ကို လွန်လွန် ကျူးကျူး အမွှမ်းတင်လွန်းလျှင် ဗမာလူမျိုးက ကျေနပ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း မွန်၊ ရခိုင်တို့က အနာဟောင်းဆွပေးသလို အခံရခက်ကြမည်။
စစ်အုပ်စုက တမင်လုပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကွန်မြူနစ်များကထင်သည်။ စစ်အင်အားနဲ့ထိန်းမှ ငြိမ်မည်၊ အနော်ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်၊ အလောင်းဘုရားတို့လို လုပ်မည် ဟု လူမျိုးစုများကို တဖက်လှည့် ခြိမ်းခြောက် နေခြင်းဟု မြင်သည်။
ဒီချုပ်ကိုလည်း လူမျိုးစုများ အရေးမှာ ပျော့ညံ့ညံ့လုပ်လျင် ခံရမည်ဟု ပြောလိုဟန် ရှိသည်။
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးကို ဇောင်းပေးစဉ် ဘီအိုင်အေခေတ်က ရာဇာဓိရာဇ်ကိုပါ ထည့်ပေးခဲ့သည်။ ဘီအိုင်အေတပ်တွင် မွန်တွေ အများကြီး ပါနေသည် မဟုတ်လော။ ထို့ ကြောင့် ဖာဖာထေးထေးလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင် ဖာဖာထေးထေး လုပ်သည်ဖြစ်စေ ပြီးခဲ့သောသမိုင်းကို ပြင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သမိုင်းကို ပြန်လှန်နေကြလျှင် အနာ ဟောင်းများသာ ကြွထလာလိမ့်မည်။ အားလုံး ကျေနပ်အောင်လည်း လုပ်၍မရပါ။ ထို့ကြောင့် ပဒေသရာဇ် အစွဲအလမ်းများအားလုံးကို ဖျောက်ရပါမည်။ အစွဲအလမ်းများရှိနေလျှင် သွေးကွဲရေးကိုသာ ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ရှေ့ကတင်ပြခဲ့သလို စစ်အုပ်စုသည် လက်နက်နှင့် အန်တုဖူးသူများကို လက်စားချေ ချင်နေသည်။ လေးငါးသိန်းရှိသည့် တပ်ကြီးရှိ ခိုက် အသာစီးမှနေကာ အကြွေးဟူသမျှ ရှင်း ချင်နေသည်။
စစ်အုပ်စု ဤသို့လုပ်နေလျှင် ပြည် ထောင်စုပြဿနာ မရှင်းနိုင်ယုံမက သံသရာ တပတ်လည်ပြီး “သီးခြားတိုင်းပြည်”၊ “ခွဲထွက် ရေး” အယူအဆများ ပြန်၍အားကြီးလာလိမ့် မည်။ ပြည်ထောင်စုပြဿနာလည်း ရှင်း၍ ရတော့မည် မဟုတ်ပါ။
နောက်အစွဲအလမ်းတခုက အမျိုး သားရေးနှင့် ပါတီရေးကို ခွဲခြားခြင်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားရေးဆိုသည့် အတွေး အခေါ်မှာ ဓနရှင်ခေတ်ပေါ်စမှ ပေါ်သည့် အတွေးအခေါ် ဖြစ်သည်။ ဓနရှင်တွေးခေါ် မြော်မြင်မှု ဖြစ်သည်။
ပဒေသရာဇ်ခေတ်က ဂျာမဏီပြည် ဟူ၍မရှိပါ။ ဂျာမန်လူမျိုးများ၏ ပဒေသရာဇ် တိုင်းငယ်ပြည်ငယ်ကလေးများ ၃ဝဝ ကျော် ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဟုတ်လိမ့်မည်။ ဗမာ ပြည်တွင်လည်း ထိုမျှလောက်ပင် ရှိခဲ့သည်ဟု ပြောရမည် ထင်သည်။
စစ်ကိုင်း၊ အင်းဝ၊ ပင်းယ တိုင်းပြည် များသည် တခေါ်သာဝေးသည့် တိုင်းပြည်များ ဖြစ်သည်။ အားလုံးကလည်း ဗမာများဖြစ် သည်။ ပဒေသရာဇ်ချင်းသာမက လူထုချင်း ကလည်း ဆွေမျိုးတော်စပ်နေသည်။ သို့သော် တိုက်ချင်လျှင် ထတိုက်ကြသည်။ မိုးညှင်းမှရှမ်း၊ မဏိပူရမှကသည်းတို့နှင့် မဟာမိတ်ပြုပြီး တဖက်တိုင်းပြည်ကို တိုက်ချင်တိုက်သည်။
ယခု ရှမ်းပြည်ဟုခေါ်သော နေရာ တွင်လည်း တိုင်းပြည်တွေ အများကြီးရှိသည်။ ဗမာများက မိုးညှင်း၊ မိုးကုတ်၊ မိုးမိတ်၊ မိုးလို ခေါ်သော “မိုး”များသည်လည်းကောင်း၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းလုံ၊ မိုင်းရှူး၊ မိုင်းနောင်ဟုခေါ်သော “မိုင်း” များသည်လည်းကောင်း တိုင်းပြည်များ ဖြစ်သည်။ ၁၉၅ဝ ခုနှစ်များအထိ အိမ်ခြေ သုံးလေးရာစီရှိသော ကျောက်ဂူနှင့် နောင်လုံ မှ လူများက ကျောက်ဂူပြည်၊ နောင်လုံပြည်ဟု ခေါ်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ လူမျိုးအရတော့ နှစ်နေရာစလုံး ရှမ်းများ၊ ဓနုများ ဖြစ်သည်။ နောင်လုံသားက ကျောက်ဂူသွားလျှင် ကျောက်ဂူပြည်သွားသည်ဟု ပြောကြသည်။ ဗမာ၊ ရှမ်း တွေသာ မဟုတ်၊ မွန်၊ ရခိုင်လည်း ထိုသို့ပင် ဖြစ်သည်။
ပဒေသရာဇ်တိုင်းသည် ထီးဆောင်း မင်းတို့၏ဘုရင် တိုင်းပြည်တရာ၏မင်း ဘွဲ့ခံ လိုကြသည်။ တရာမပြည့် ပြည့်အောင် စစ် အင်အားရှိလျှင် နယ်ပယ်ချဲ့ မည်။ မရှိလျှင်လည်း တရာပြည့်အောင် စာရင်းချမည် ဖြစ်သည်။
အထက်ဗမာပြည် ကွက်ကွက် ကလေးတွင် မင်းလုပ်သော မင်းတုန်းမင်းကို “ရာပြည့်မင်း”ဟု မြှောက်သူက မြှောက်သည်။ မင်းတုန်းမင်းကလည်း ကျေနပ်သည်။ မြှောက် သူရောဘုရင်ပါ စိတ်မသိုးမသန့် မဖြစ်ကြပါ။ ဤမျှရေးနေရခြင်းမှာ ပဒေသရာဇ် ခေတ်က အမျိုးသားရေးစိတ် မရှိကြောင်း တင်ပြလို၍ဖြစ်သည်။ ယခု စစ်အုပ်စုခေတ်တွင် ပါတီရေးနှင့် အမျိုးသားရေးကို ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်လေဟန် ပြောနေကြသည် ကိုလည်း ကွန်မြူနစ်များသဘောမတူပါ။
ပါတီရေးလုပ်လေတိုင်း အမျိုး သားရေးနှင့် ဆန့်ကျင်သည် မဟုတ်ပါ။ ဘာ လုပ်သလဲဆိုတာက အခရာကျသည်။
နအဖက သူတို့ကို အမျိုးသားရေး ဦးဆောင်မှုအခန်း ပေးရမည်ဟု ပြောနေသည်။ စစ်အုပ်စုလုပ်တာမှန်သမျှ အမျိုးသားရေး၊ ဒီချုပ်လုပ်တာ မှန်သမျှ ပါတီရေးဟု ပြောချင် နေသည်။
ကွန်မြူနစ်တို့အမြင်အရဆိုရလျှင် စစ်အုပ်စုက လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဒီချုပ်က လုပ်သည်ဖြစ်စေ ဗမာပြည်၏ အဆင့်နေရာကို နိမ့်ကျအောင်လုပ်လျှင် အမျိုးသားဆန့်ကျင်ရေး ဖြစ်သည်ဟု မြင်သည်။ တိုင်းပြည်အဆင့်နေရာ မြင့်တက်အောင်လုပ်လျှင် မည်သူလုပ်လုပ် အမျိုးသားရေးတာဝန် လုပ်သည်ဟု ယူဆ သည်။
အစီရင်ခံခဲ့တာ များလှပြီ။ အောက် ပါအတိုင်း နိဂုံးချုပ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ထူထောင်ရေး နှီးနှောပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုကို လက်ခံသူများ သာ ပါသင့်သည်။
သားသတ်လိုင်စင်စီ ကဇော်သမား ကို “ငါးပါးသီလမြဲရေး အစည်းအဝေး မဖိတ် သင့်သလို ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် တည်ဆောက် ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် စစ်အုပ်စုကို မဖိတ် သင့်ပါ။ စစ်အုပ်စုက ငါတို့လည်းပါချင်သည်ဟု ပြောလျှင် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဦးစီးကျင်းပသည့် အာဏာပိုင်က သူ့အဖွဲ့ထဲထည့်ပြီး ခေါ်လာလို့ ရသည်။ ဦးနုတုန်းက သူ့သန့်ရှင်းအဖွဲ့လည်း မပါ၊ အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လည်း မပါဘဲ ။ ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ လုပ်ခြင်းသည်မှားသည်။ (သူကလည်း နိုင်ငံရေးကစားချင်၍သာ၊ မဲရရေးမှီခိုခဲ့ရ၍သာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ မရိုး သားပါ။ စေတနာကောင်း မရှိခဲ့ပါ။)
ဤတွင် “စစ်အုပ်စု”ဆိုသည်မှာ – – နှင့်ပတ်သက်သော ကျွန်တော်တို့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ချက်ကို တင်ပြပါမည်။
စစ်အုပ်စု ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး စစ်တပ်အတွင်း တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေရင်း နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူများကို ဆိုလိုခြင်း၊ ဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ၊ မဆလ အလုပ်အမှုဆောင်၊ န၀တ နအဖ မည်သည့်နာမည်ယူထားထား တာဝန်ထမ်း ဆောင်ဆဲ အစိုးရဝန်ထမ်းက နိုင်ငံရေးလုပ်နေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
စစ်အုပ်စုက အင်အားစုတခုအဖြစ် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ပါနေလျင် နှီးနှောပွဲ တက်သော တခြားပါတီများ အင်အားစုများက ရိုက်မစစ်ရဘဲ ဖော်ကောင်လုပ်နေရသလို ဖြစ် လိမ့်မည်။
ဒီမိုကရေစီရှိသည်ထင်ပြီး စွတ်ပြော ကြလျှင် ဒုက္ခတွေ့မည်။ စပ်ရွှေသိုက်၊ စပ်ခွန်ချို၊ စပ်ကြာဆိုင်တို့ နမူနာထက် ပိုဆိုးလိမ့်မည်။ သူတို့မကြိုက်တာ ပြောမိလျှင် အာဏာသိမ်း လိမ့်မည်။ သူတို့လုပ်နေသော “အမျိုးသား ညီလာခံ” မျိုးဆိုလျှင်လည်း အဓိပ္ပာယ်မရှိ။ ဒီချုပ် သပိတ်မှောက်သလို မှောက်ရလိမ့်မည်။
နောက်ရှင်းစရာက စစ်အုပ်စုဝင် ဟောင်းများပြဿနာ ဖြစ်သည်။ အကျယ် တင်ပြစရာ မရှိပါ။ ဒီချုပ်နှင့် တစညတို့ကိုပဲ ကြည့်ပါ။ သူတို့သည် စစ်တပ်ကထွက်လာပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကြိုဆိုပါ သည်။
န၀တ နအဖ လက်ထက်တွင် စစ် အုပ်စုဝင်ဟောင်းများချည်း နိုင်ငံရေးလုပ်နေ ကြသည် မဟုတ်လော။ သူများတွေ ထောင်ထဲတွင် အရိုးထုတ်ရမလို ဖြစ်နေခိုက် သူတို့သာ ဘေးကင်းရန်ကင်း ဖြစ်နေသည်။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နှင့် အလွန်နီးစပ်သော ဗိုလ် တင်ဦးတယောက်သာ ထောင်ထဲရောက်သည်။ နျူရင်ဘာ့ဂ်ဟု အာချောင်မိသော ဗိုလ်ကြည် မောင် စတိသဘော ထောင်ထဲရောက်သည်။ စိတ်မဆိုးဘဲ ကျွဲမြီးတိုသောဗိုလ်ခင်ညွန့် ပညာပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်တော့ ဗိုလ်ကြည်မောင် လေသံပျော့သွားသည်။ သူလည်း “သက်တော်ရှည်ဝန်ကြီး” လက်မှတ် ရလိုက်ဟန် ရှိ၏။
အောင်ကြီး အမေရိကန် ထွက်ပြော တာမျိုး ဒီချုပ်ရောက်ဗိုလ်များ ပြောကြည့်ပါ။ “သက်တော်ရှည်” ဘဝက လျှောကျမည် မလွဲ ပါ။
တစည သည်လည်း တပ်ထွက် စစ်ဗိုလ်တွေ ဖြစ်သည်။ သူတို့နိုင်ငံရေးလုပ်တာ ကြိုဆိုသည်။ သူတို့အခုလုပ်နေတာ သိပ်အား မရလို့ များများကြေညာချက်ထုတ်ပါ များများ ပြောပါဟုပင် ဗကပက အားပေးနေသည်။
န၀တ နအဖ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုလည်း အထူးတလည် ပန်ကြားလိုပါသည်။ တပ်ကထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ကြပါ။ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ဖော်ထုတ် ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတက်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ပြောကြဆိုကြ အကြံပေးကြပါဟူ၍။
၁၉၄၅ ကတည်းက ဗမာပြည် နိုင်ငံရေးလောက အသွင်ပြောင်းခဲ့ပါသည်။ တော်လှန်ရေးသမားတွေ၊ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေပဲ နိုင်ငံရေးလောကတွင် တွင်ကျယ်သည်။ ခေတ်ဟောင်းနိုင်ငံရေးသမားများ ဘေးထိုင် ဘုပြော ဖြစ်သွားသည်။
ယခု နှစ်ပေါင်း ၅၇ နှစ်ရှိသောအခါ ထိုမျိုးဆက်ပြတ်တော့မည်။ မျိုးဆက်သစ် ခေတ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ တပ်ထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးလောကသို့ ဝင်သင့်ပါကြောင်း တင်ပြ ရင်း အစီရင်ခံစာကို နိဂုံးချုပ်ပါသည်။
(အစီရင်ခံစာ ၂ စောင်တွင် ပြဿနာများအားလုံး ပြွတ်သိပ်နေအောင် ထည့်ပေးပြီးဖြစ်၍ နောက်ထပ်အစီရင်ခံစာရေး တင်ပြရန် မရှိတော့ပါ။)
၂၀၀၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် ပြည်သူ့အာဏာ အမှတ် ၂၂ မှ
Author pansodanschoolPosted on January 5, 2022 January 5, 2022 Categories ဆောင်းပါး, တော်လှန်‌ရေးသမိုင်း
Previous Previous post: ပြည်သူသာလျှင် ပဓါန (ဟွန်ဆန်၏ ခရီးစဉ်ကို ရှုမြင်ကြည့်ခြင်း) – လင်းသူ့ဟန်
Next Next post: တော်လှန်ရေးကို နောက်တဆင့် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် အချက်များ – ရဲ‌ဘော်နျူးမန်း